ကိုပေါရဲ့ ပိတောက်ရိပ်၊ Ko Paw's Padauk-Yeik: July 2009
တရားစီရင်မှုကဏ္ဍတွင် လူသိများသော စကားတခုရှိသည်။
“It is better to let nine guilty persons go free, than to convict one innocent person.”
အပြစ်မရှိသူတယောက်အား ပြစ်မှုကျူးလွန်သည်ဟု စီရင်ချက် ချမိခြင်းနှင့်စာလျှင် အမှန်တကယ် ပြစ်မှုကျူးလွန်သူ ကိုးယောက်ကို လွှတ်ပေးမိခြင်းကမှ တော်ပေသေး၏ဟု အဓိပ္ပါယ်ရသည်။
ထိုသို့ အပြစ်မရှိသူကို ပြစ်မှုထင်ရှားသည်ဟု စီရင်ချက် ချမိရာတွင်….
(၁) ရိုးရိုးသားသား မှားယွင်းစီရင်ချက်ချမိခြင်းနှင့်
(၂) မကျူးလွန်မှန်းသိသိနှင့် တမင်သက်သက် မတရား စီရင်ဆုံးဖြတ်ခြင်း…. ဟူ၍ နှစ်မျိုးနှစ်စား ကွဲပြားနိုင်သေးသည်။
ရိုးရိုးသားသား မှားယွင်းစီရင်ချက်ချမိခြင်းသည် မောဟဂတိ (အမှန်ကိုမသိခြင်း)ကြောင့်ဟု ဆိုရမည်ဖြစ်ပြီး တမင်သက်သက် မတရားစီရင်ချက်ချမှတ်ခြင်းကား ဆန္ဒာဂတိ(ချစ်ခြင်းကြောင့်)၊ ဘယာဂတိ(ကြောက်ရွံ့ခြင်းကြောင့်) နှင့် ဒေါသဂတိ (မုန်းတီးခြင်းကြောင့်)ဆိုသည့် အဂတိတရား များကြောင့် ဖြစ်ပေသည်။ ပထမ အမှားသည် သက်ဆိုင်ရာ တရားသူကြီး၏ ညံ့ဖျင်းချက်ကြောင့်ဖြစ်ပြီး ဒုတိယအမှားဖြစ်ပါက သက်ဆိုင်ရာ တရားရေးစနစ်တခုလုံး ညံ့ဖျင်းခြင်းနှင့် တရားဥပဒေစိုးမိုးမှု မရှိခြင်း၊ သတင်းစာ လွတ်လပ်ခွင့်မရှိခြင်းနှင့် အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်တခုလုံး မှားယွင်းဖောက်ပြန်နေခြင်းတို့ ကြောင့်ပါ ဖြစ်ရချေသည်။
မနက်ဖြန် အင်းစိန်ထောင်တွင်း တရားရုံး၌ အပြစ်မဲ့သူတယောက်ကို မတရား ရုံးတင် အမှုဆင် စစ်ဆေးနေသောအမှုတွင် တရားသူကြီးမှ စီရင်ချက် ချမှတ်ပေလိမ့်မည်။
စိတ်ဓါတ်တည်ကြည်ခိုင်မာပြီး ရဲဝံ့သော ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အဖို့ မည်သည့် စီရင်ချက်ကို ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့သည်ဖြစ်စေ ဤလောကဓံမျှကို တုန်လှုပ်မည်မဟုတ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ချီးကျူးဂုဏ်ပြုထိုက်သော၊ အတုယူလေးစားဖွယ်ကောင်းသော၊ ကြည်ညိုထိုက်သော လူသားတယောက်ဖြစ်သည်။ ခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်သည်။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ကောင်း တယောက်ဖြစ်သည်။
သူမ၏ အတွေးအခေါ်၊ သူမ၏ လုပ်ရပ်၊ သူမ၏ ရပ်တည်ချက်၊ သူမ၏ ခံယူချက်တို့သည် လူ့လောကတွင် လူသားတယောက်အနေဖြင့် အမြင့်မားဆုံး ပိုင်ဆိုင်နိုင်သော စံချိန်စံညွှန်းအဖြစ် တည်ရှိလျက်ရှိသည်။
ထိုသို့သော သူတဦးအပေါ်တွင် မတရားစီရင်ချက်ချမှတ်ပါက တရားသူကြီးသည်လည်းကောင်း၊ တရားသူကြီး၏ နောက်ကွယ်မှ ကြိုးကိုင်နေကြသူများသည်လည်းကောင်း ၄င်းတို့ပြုသော ဒုစရိုက်မှုအတွက် အကုသိုလ်ကံ၏ အကျိူးပေးနှင့် ပြည်သူလူထု၏ စီရင်ချက်ကို အနှေးနှင့်အမြန် ဆိုသလို ပြန်လည် ခံစားကြရပေမည်။
သတိချပ်သင့်သည်မှာ ယခု တရားခွင်သည် လူတဦးတယောက်၏ အနာဂတ်ကိုသာ စီရင်ဆုံးဖြတ်နေခြင်း မဟုတ်။
လူထုတရပ်လုံးက ထောက်ခံသော၊ ပြည်သူလူထုတရပ်လုံး၏ အကျိုးစီးပွားကို ဘ၀နှင့်ရင်းကာ အရယူပေးရန် ကြိုးပမ်းနေသော လူထုခေါင်းဆောင်တယောက်အပေါ် တဖက်သတ် စီရင်နေသော တရားခွင်ဖြစ်ရာ မတရားသဖြင့် စီရင်ချက်ချပါက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တဦးတည်းကိုသာ မတရားဖိနှိပ်ရာ ရောက်သည်မဟုတ်။ ပြည်သူလူထုတရပ်လုံး၏ အနာဂတ်နှင့် တိုင်းပြည်ကံကြမ္မာကိုပါ နိမ့်ပါးညှိုးနွမ်းဆုတ်ယုတ်စေရန် ယုတ်မာပက်စက်သော ကြံရွယ်ချက်ဖြင့် စစ်အစိုးရမှ တဖက်သတ် ကျူးလွန်သော စက်ဆုပ်ရွံရှာစဖွယ် နောက်ထပ် ရာဇ၀တ်မှုကြီးတခုသာ ဖြစ်ချေတော့မည်။
Posted by ကိုပေါ on Thursday, July 30, 2009
အလျား လေးပေခန့်၊ အချင်း တလက်မခွဲလောက်ရှိသော ၀ါးရင်းတုတ်တချောင်းသည် သက်ကြီးရွယ်အိုတယောက်အား လမ်းလျှောက်ရာတွင် ထောက်ကူနိုင်သော တောင်ဝှေးတချောင်း ဖြစ်နိုင်သလို လူဆိုးလူသွမ်းတို့က တပါးသူအား ရိုက်နှက်၍ နှိပ်စက်ကလူပြုရာတွင် အသုံးပြုသော လက်နက် (သို့မဟုတ်) လက်ကိုင်တုတ်လည်း ဖြစ်နိုင်ပေသည်။
တုတ်၏ သဘာဝ သည် အတူတူပင်ဖြစ်ပါလျက် အသုံးပြုသူအပေါ်မူတည်၍ (သို့တည်းမဟုတ်)အသုံးပြုခံရသည့် အနေအထားပေါ်တွင် မူတည်၍ ယင်းတုတ်ကို ခေါ်ဆိုသော အခေါ်အဝေါ်လည်း ကွဲပြားသွားပေသည်။ တဖန် အခေါ်အဝေါ်အပေါ် မူတည်ပြီး အဆိုပါ တုတ်အပေါ်တွင် လူတို့ထားရှိသော အမြင်သည်လည်း ကွဲပြားသွားပေသည်။
ယနေ့မြန်မာနိုင်ငံပြည်သည် စစ်အာဏာရှင် လက်အောက်တွင် ဖိနှိပ်ခံရသည်မှာ ၁၉၆၂ ခုနှစ်မှ စတင်ရေတွက်သော် နှစ်ပေါင်း ၄၇ နှစ်မျှ ကြာခဲ့ပြီ ဖြစ်သည်။ စစ်အာဏာရှင်စနစ်သည် Totalitarianism ဆိုသည့်အခေါ်အဝေါ်နှင့် လိုက်ဖက်စွာပင် ကိစ္စတိုင်းအပေါ်တွင် အာဏာသက်ရောက်ကာ ထိန်းချုပ်စွက်ဖက်လျက်ရှိသည်။ ၀န်ကြီးမှ စ၍ ညွှန်ကြားရေးမှူး၊ အမှုထမ်း၊ အရာထမ်းအလယ်၊ ပြာတာနှင့် ဆိုက်ကားသမား အဆုံး မည်သူတဦးတယောက်မျှ မိမိ ၀တ္တရားရှိသည့်အတိုင်း လွတ်လပ်စွာ ပြုမူကျင့်ကြံနိုင်ကြသည်မဟုတ်။ အာဏာရှင်၏ အလိုဆန္ဒအတိုင်း လိုက်လံဆောင်ရွက်ကြရလျက် ရှိသည်။
အာဏာရှင်ချမှတ်သော ပညာရေးပေါ်လစီကို ပါမောက္ခများ၊ ပညာရေးမှူးများ၊ ကျောင်းအုပ်ကြီးများ၊ ဆရာများက တသွေမသိမ်း လိုက်လံ ကျင့်ကြံရသည်။ ယင်း ပညာရှင်များအနေဖြင့် သူတို့ တတ်ကျွမ်းသည့် ပညာရပ်များကို လွတ်လပ်စွာ အသုံးပြုပိုင်ခွင့်မရှိ။ သင်ရိုးညွှန်းတမ်းများကိုပင် လွတ်လပ်စွာ ပြုစု သင်ကြားခွင့်မရှိ။
အလားတူပင် အာဏာရှင် ချမှတ်သော ကျန်းမာရေး ပေါ်လစီကို ဆရာဝန်ကြီးများ၊ အထူးကုများ၊ ဆေးရုံအုပ်ကြီးများ၊ သူနာပြုများ၊ ကျန်းမာရေးလုပ်သားများက တသွေမသိမ်း လိုက်နာကျင့်ကြံရသည်။ ယင်းတို့အနေဖြင့် သူတို့ တတ်ကျွမ်းသည့် ပညာရပ်များကို လွတ်လပ်စွာ အသုံးပြုပိုင်ခွင့်မရှိ။ ဥပမာပေးရလျှင် ရောဂါဖြစ်သူ ဦးရေကို စာရင်းဇယားကောက်ခံရာ၌ပင် လွတ်လပ်စွာ ကောက်ခံခွင့်မရှိ။ စာရင်းဇယားကို အမှန်အတိုင်း တင်ပြခွင့်မရှိ။ ဆေးရုံများတွင် ထိရောက်စွာ လက်ခံကုသခွင့် မရှိ။ ရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးလုပ်ငန်းများ၊ ကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းများကို ထိရောက်စွာ လုပ်ပိုင်ခွင့်မရှိ။
အခြား စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး နယ်ပယ်များတွင်လည်း အလားတူပင်တည်း။
ညွှန်ကြာရေးမှူးချုပ်ကစ၍ ပြာတာ အထိ၊ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်ကစ၍ လမ်းဘေးဈေးသည်အထိ၊ ကွန်ပြူတာပညာရှင်မှစ၍ ဆိုက်ကားသမားအထိ အာဏာရှင်စနစ်အောက်တွင် အာဏာရှင်အလိုကျ၊ အာဏာရှင် ခိုင်းစေသမျှကို မလွန်ဆန်နိုင်ဘဲ (စိတ်ပါသည်ဖြစ်စေ၊ မပါသည်ဖြစ်စေ) လုပ်ကိုင်နေကြရသည်သာ ဖြစ်သည်။ ထိုသို့ အာဏာရှင် ခိုင်းစေရာကို လိုက်လံလုပ်ကိုင်ကြရသည့်အထဲတွင် အတန်းပညာကို ကောင်းစွာ သင်ကြားခွင့်မရခဲ့ရှာသော ဆင်းရဲသားများ၊ လက်လုပ်လက်စားများလည်း ထိပ်ဆုံးကပါသည်။
ဆရာဝန်ကြီးများ၊ ပညာရှင်ကြီးများပင် အာဏာရှင်ခိုင်းစေသမျှကို မတွန်းလှန်ဝံ့ဘဲ လိုက်လံလုပ်ကိုင်နေကြရသည့် ခေတ်အခါကြီးထဲတွင် ပညာလည်းမတတ်၊ နေ့စဉ်ဘ၀တွင်လည်း နင်းပြားသဖွယ် လူတကာအား အောက်ကျို့ဆက်ဆံရရှာသော လက်လုပ်လက်စား လူတန်းစားအဖို့ အဘယ်သို့သော သတ္တိဖြင့် အာဏာရှင်၏ ခိုင်းစေမှုကို ငြင်းပယ်နိုင်အံ့နည်း။ ထိုလူတန်းစားမှာ ပညာတတ်အရာရှိကြီးများကဲ့သို့ ချမ်းသာလောက်အောင် အကျိုးအမြတ်မခံစားရပါဘဲ၊ ရာထူးတက်လမ်းမရှိပါဘဲ တနေ့စာ ၀င်ငွေမျှအတွက်ပင် အာဏာရှင်ခိုင်းစေရာကို လုပ်ဆောင်ရရှာပြီး ရသည်နှင့်မတန်အောင် လူမုန်းခံသည်လည်းဖြစ်ရာ အဘယ်ကြောင့် အာဏာရှင်ခိုင်းတိုင်း လုပ်ရသည်ကို တွေးတောကြည့်ရန် လိုပေလိမ့်မည်။
ယခုအခါ ပြည်သူအများ မျက်မုန်းကျိုးဖွယ် ဗီလိန်နေရာမှ အသုံးတော်ခံရန် စွမ်းအားရှင်ဟူသည့် လူတန်းစား တရပ်သည်လည်း မြန်မာပြည်တွင် ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပြီ ဖြစ်သည်။ ကျနော်တို့အားလုံးလိုလိုသည် အဖြစ်သနစ်၏ ဇာတိဇစ်မြစ်ကို သေသေချာချာ စဉ်းစားတွေးတောခြင်း မပြုကြဘဲ စွမ်းအားရှင် ဆိုလျှင် အလွယ်တကူ မုန်းတီးမိလိုက်ကြသည်။ နအဖ၏ ဒေါက်တိုင်တွေဟု အလွယ်တကူ သမုတ်လိုက်ကြသည်။ အချို့သော သူများဆိုလျှင် နအဖ ဒေါက်တိုင်များကို ဖြိုခွင်းရန် ဦးတည်ချက်ဖြင့် စွမ်းအားရှင်များ၊ ကြံဖွံ့များကို အကြမ်းဖက် တိုက်ခိုက်ချေမှုန်းရန်ပင် အစီအစဉ် ရှိကြသည်ဆိုသည်။ ဤသည်မှာ မဆိုင်သည့်အပေါက်ကို ဂလိုင်ဖြင့်ခေါက်သည်ဟု ကျနော်ယူဆပါသည်။
တကယ်တော့ စွမ်းအားရှင်တွေသည်လည်း အာဏာရှင်စနစ်၏ သားကောင်များသာ ဖြစ်သည်။ အာဏာရှင်စေခိုင်းရာ လိုက်ပါ လုပ်ကိုင်ကြရသူချင်းအတူတူ ဆရာဝန်ကြီးများ၊ ကျောင်းအုပ်ဆရာကြီးများ၊ ဆရာဝန်ကြီးများ၊ အစိုးရအရာရှိကြီးများကို ဆက်ဆံရာတွင် တမျိုး၊ ပညာသင်ကြားခွင့်မရခဲ့သော ဆင်းရဲမွဲတေမှုဒဏ်ကို ခါးစည်းခံနေကြရသော ဆင်းရဲသားများကို ဆက်ဆံရာတွင်တမျိုး ခွဲခြားဆက်ဆံသလို ဖြစ်နေသည်ကို တွေ့ရသည်။ ထိုသို့ဆိုလျှင် ဆင်းရဲမွဲတေ၍ ပညာမတတ်သူများကို မြေနိမ့်ရာ လှံစိုက်သလို ထပ်မံ ဖိထောင်းရာ ရောက်နေချေပြီလောဟု စဉ်းစားစရာရှိလာသည်။။ ဦးပုည စကားနဲ့ ပြောရလျှင်…. “အစွယ်လိုသူ မိဖုရား၊ အသွားစေခိုင်းသူ မင်းဧကရာဇ်၊ လေးပစ်သူ ဘုရားကျွန်တော်…၊ ဤကြံဖော်ကြံဖက်၊ သုံးယောက်သားအနက်တွင်မှ၊ ကံကွက်ကျား၍၊ ငမိုက်သားမုဆိုးလေ၊ နင့်ချည်းပင် သေပေတော့ဟု၊ ငွေတောင်ကြီး အဟန်၊ ဆဒ္ဒန်မင်းမြတ်၊ သတ်လျှင်လည်း ၊ လူမလိမ္မာ၊ ကျွန်မိစ္ဆာသည်၊ မလွတ်နိုင်ရာ၊ သေရပါတော့မည်” ဆိုသကဲ့သို့ စွမ်းအားရှင်တို့သည် သောနုတ္ထိုရ် မုဆိုးနေရာကို ကံဆိုးမိုးမှောင်ကျစွာ ကွက်တိ ၀င်ရောက်နေကြခြင်းသာ ဖြစ်ပေသည်။
ဆဒ္ဒန်ဆင်မင်းကတော့ အလောင်းတော်ပီပီ “အလောင်းတော်မြတ်၊ ဗောဓိသတ်လည်း၊ လောကတ္တယ၊ ဘ၀ပါရဂူ နီးစပ်တော်မူသောကြောင့်၊ ရန်သူပုဂ္ဂိုလ်၊ သောနုတ္ထိုရ်ကို၊ ရွှေကိုယ်တော်ပွား ရင်နှစ်သားကဲ့သို့၊ သနားချစ်ခင်၊ အသက်ကို ချမ်းသာပေးတော်မူပြီးလျှင်…..”ဆိုသည့်အတိုင်း မုဆိုးကို အသက်ချမ်းသာပေးခဲ့ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ကရော ပညာမျက်စိနှင့် ချင့်ချိန်ဆုံးဖြတ်လျက် သတိတရားရှေ့ထားကာ ပြုမူမည်လော။ သို့တည်းမဟုတ် ခံစားမှုသက်သက်ဖြင့် စိတ်လိုက်မာန်ပါ ပြုလုပ်ကြမည်လား။ ဤသို့ရေးသဖြင့် စွမ်းအားရှင်များ၊ ကြံ့ဖွံ့များ၏ ဘက်မှ ဘက်လိုက်ကာ ရေးသားနေသည်ဟု ကောက်ချက်မချစေလို။ စွမ်းအားရှင်တို့၏ လုပ်ရပ်များ၊ ကြံဖွံ့များ၏ လုပ်ရပ်များကို အများနည်းတူ ကျနော်သည်လည်း ရှုတ်ချသည်ပင်ဖြစ်သည်။ ဆန့်ကျင်သည်သာလျှင်ဖြစ်သည်။ သို့သော် ထိုလူတန်းစား၏ အကြပ်အတည်းနှင့် အနေအထားကို သုံးသပ်နိုင်ရန် ရေးပြခြင်းဖြစ်ပြီး အဓိက ရန်သူမှာ မည်သူဖြစ်သနည်းဆိုသည့်အချက်ကို မေ၀၀ါးစေရန် ဆိုလိုရင်းဖြစ်သည်။
တကယ်တော့ နအဖသည် အိမ်ကြက်အချင်းချင်းကို အိုးမဲသုတ်ပြီး ခွပ်စေခြင်းသာဖြစ်သည်။ ကျနော်တို့သည် စွမ်းအားရှင်တွေကို ချောင်းမြောင်းလုပ်ကြံပါက ပြည်သူအချင်းချင်း သတ်ဖြတ်ရသည်ဖြစ်၍ သွေးချောင်းစီးသည်သာ အဖတ်တင်မည်။ အကြမ်းဖက်ခြင်းဖြင့် ငြိမ်းချမ်းရေးကို မရနိုင်ပါ။ မငြိမ်းချမ်းလျှင် လွတ်လပ်ခြင်းလည်း မမည်ပါ။ ဖြစ်သင့်ဖြစ်ထိုက်သည်မှာ အာဏာရှင်တို့၏ လက်ကိုင်တုတ်များကို ကျွန်ုပ်တို့၏ တောင်ဝှေးဖြစ်လာစေရန် ကျွန်တော်တို့ ကြိုးပမ်းကြရမည်ဖြစ်သည်။
ဤကိစ္စသည် လွယ်ကူသည့်ကိစ္စဟု မဆိုလိုပါ။ အင်မတန် ခက်ခဲပါသည်။ အချိန်ယူရမည်လည်း မုချပင်ဖြစ်ပါသည်။ စွမ်းအားရှင်မှစ၍ စစ်ဗိုလ်စစ်သားများအထိ မိမိတို့ဖက် ပါလာစေရန် စည်းရုံးရေး နည်းလမ်းများကို တီထွင်ကြံဆကြဖို့ လိုပါသည်။ လက်တွေ့ စည်းရုံးကြဖို့ လိုပါသည်။ တဖက်တွင်လည်း အကြမ်းမဖက် ငြိမ်းချမ်းသောနည်းဖြစ်သည့် သပိတ်မှောက်ခြင်း၊ ဆန္ဒပြအုံကြွခြင်း၊ အာဏာဖီဆန်ခြင်းများကို စနစ်တကျ ပြုလုပ်ကြဖို့ လိုပါသည်။
အာဏာရှင်စနစ်တခုကို ဖြိုဖျက်ရသည့် ကိစ္စမှာ လွယ်ကူသည့်ကိစ္စ မဟုတ်ပါ။ သို့သော် မလွယ်ကူသဖြင့် ဘာမှ မလုပ်ဘဲ ထိုင်နေသင့်သည်လည်း မဟုတ်။ လွတ်လပ်ရေးရသည်အထိ မျိုးဆက်ပေါင်းများစွာ လက်ဆင့်ကမ်း ကြိုးပမ်းသွားကြရမည်သာ ဖြစ်သည်။ ဤသို့ ကြိုးပမ်းရာ ခရီးတလျှောက်တွင် အာဏာရှင်တို့၏ လက်ကိုင်တုတ်များကို တွေ့တိုင်း ထိုသူတို့သည်လည်း မိမိတို့လိုပင် စနစ်၏ သားကောင်များပင်ဖြစ်သည်ကို နားလည်သဘောပေါက်ကာ အာဏာရှင်၏ လက်ကိုင်တုတ်အဖြစ်မှ ပြည်သူလူထုအားထားရသော တောင်ဝှေးအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲလာစေရန် ကြိုးပမ်းအားထုတ်ကြဖို့ လိုမည်ဖြစ်သည်။
Posted by ကိုပေါ on Tuesday, July 28, 2009
ပုဂံခေတ်မှာ ဗုဒ္ဓဘာသာ မြန်မာပြည် (ပုဂံပြည်)ကို ရောက်လာပုံဟာ စိတ်ဝင်စားစရာ မကောင်းဘူးလား။ အဲသည်မတိုင်ခင်က အရည်ကြီးတွေ လွှမ်းမိုးနေရာကနေ ဗုဒ္ဓဘာသာကို ပြောင်းသွားလိုက်ပုံများ အင်မတန် လျှင်မြန်လွန်းတယ်။ အခုခေတ် နိုင်ငံရေးသမားတွေ ပြောပြောနေတဲ့ Paradigm shift ဆိုတာ ဒါမျိုးလား လို့တောင် တွေးမိတယ်။
တကယ်စဉ်းစားကြည့်တော့ ကိုယ်မိရိုးဖလာ ယုံကြည်သက်ဝင်လာတဲ့ ဘာသာတခု (သို့မဟုတ်) ယုံကြည်သက်ဝင်မှု တခုကနေ နောက်တခုကို လုံးဝ ပြောင်းလဲလိုက်ဖို့ဆိုတာ လွယ်ကူတဲ့ကိစ္စတော့မဟုတ်ဘူး။ နှစ်ရှည်လများ အမြစ်တွယ်လာတဲ့ အရည်းကြီးသာသနာကနေ ဗုဒ္ဓသာသနာကို အချိန်တိုတိုလေးအတွင်းမှာ ကူးပြောင်းလိုက်နိုင်တာ အံ့သြစရာပဲ။ ဘုရင်ဖြစ်သူ အနော်ရထာကိုယ်တိုင်က ဒီဘာသာတရားကို သက်ဝင်ယုံကြည်လို့ ပြည်သူတွေကိုလည်း အာဏာစက်သုံးပြီး ယုံကြည်ခိုင်းတဲ့အတွက် ဒီလောက်ပျံ့ပွားသွားတာလား။ ဒီလိုတော့ ဖြစ်နိုင်မယ် မထင်ဘူး။ လူတယောက်ရဲ့ ယုံကြည်မှုကို ဓားမိုးပြီး အတင်းယုံကြည်ခိုင်းရင် ခိုင်းသမျှသာ လုပ်မယ်။ သဒ္ဓါတရားပေါက်လာတဲ့အထိတော့ ယုံကြည်လိမ့်မယ်မဟုတ်။ အဲသည် ဘုရင် ကွယ်လွန်သွားတာနဲ့ နဂိုယုံကြည်မှုကို ပြန်ကျင့်သုံးမှာပေါ့။
ဒါမှမဟုတ် ဘုရင်ကို ပြည်သူတွေက ချစ်မြတ်နိုးလို့ သူကိုးကွယ်တဲ့ ဘာသာကို လိုက်လံကိုးကွယ်တာလား။ ဒါလည်း သိပ်တော့ မဖြစ်နိုင်ပြန်ဘူး။ လူတယောက်ကို ချစ်ခင်ရုံနဲ့ မိရိုးဖလာ ကိုးကွယ်ယုံကြည်လာခဲ့တဲ့ အရာတခုကို ၀ုန်းကနဲ ပြောင်းဖို့ ဆိုတာမလွယ်ဘူးလေ။
အဖြစ်နိုင်ဆုံးကတော့ အရည်းကြီးသာသနာနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ရင် ဗုဒ္ဓဘာသာက ပိုမို နှစ်လို လက်ခံနိုင်ဖွယ်ရှိတယ်၊ ကျိုးကြောင်းညီညွတ်မှုရှိတယ် စတဲ့အချက်တွေကြောင့် လူအများဟာ သူ့သဘော သူ့ဆန္ဒအလျောက် အလွယ်တကူ ပြောင်းလဲ သက်ဝင်လာကြတာလို့ ကျနော်ယူဆပါတယ်။
ဘယ်လိုအကြောင်းကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ပုဂံခေတ်မှာ ဗုဒ္ဓဘာသာ ထွန်းကားတောက်ပ ခဲ့တယ်ဆိုတာကတော့ ပုဂံက ဘုရားပုထိုးတွေ၊ အုတ်ခွက်တွေ၊ ကျောက်စာတွေမှာ သက်သေထင်ရှားကျန်ရစ်ခဲ့တယ်။
ဒီနေရာမှာ ကျနော်ဆက်ပြီး စဉ်းစားတာက ဘာသာတရားလို အင်မတန်နက်နဲတဲ့ အတွေးအခေါ်၊ အယူအဆတခုကိုတောင် အဲသည်တုန်းက မြန်မာတွေဟာ အလွယ်တကူ လက်ခံနိုင်ခဲ့ကြတယ်ဆိုရင် သူတို့ဟာ အတွေးအခေါ်သစ်၊ ယဉ်ကျေးမှုအသစ်တွေကို အခုခေတ်ထက် ပိုမို တိမ်းညွတ်လွယ်သလားဆိုတဲ့ အချက်တချက်ကို သွားစဉ်းစားမိတယ်။
နောက်တချက်က ပုဂံခေတ်ကနေ ကုန်းဘောင်ခေတ်အထိ ဘုရင်တွေ စစ်တိုက်ကြလို့ စစ်နိုင်ပြီး ပြန်လာရင် ဖြစ်စေ၊ နှစ်နိုင်ငံရွှေလမ်းငွေလမ်းဖောက်ပြီး လက်ဆောင်ပဏ္ဏာဆက်သလို့ဖြစ်စေ လူသူရဲကောင်း၊ ရဟန်းသူရဲကောင်း၊ လူပညာရှိ၊ ရဟန်းပညာရှိ၊ လက်မှုပညာရှင်၊ အတတ်ပညာရှင်တွေကို မိမိတိုင်းပြည်ပြန်လာတဲ့အခါ သယ်ဆောင်လာကြသတဲ့။ ဒီလိုနည်းနဲ့ (အဲသည်တုန်းက ဘေးပတ်ဝန်းကျင်က တိုင်းပြည်တွေဖြစ်တဲ့) မွန်၊ ရှမ်း၊ ယိုးဒယား စတဲ့ နိုင်ငံတွေကနေ ယဉ်ကျေးမှုတွေ၊ လက်မှုအတတ်ပညာတွေပါ မြန်မာတွေ ရလိုက်ကြတယ်။
မြန်မာပြည်ဟာ တောင်တန်းတွေ ပတ်ပတ်လည်ကာရံထားပြီး မင်းနေပြည်တော် စိုက်တာကလည်း မြန်မာပြည်အလယ်ပိုင်းဒေသတ၀ိုက်မှာဆိုတော့ ရေကြောင်းသွားလာရတဲ့ခေတ်အခါမှာ ဆိပ်ကမ်းမရှိတဲ့အလျောက် ပြင်ပကမ္ဘာနဲ့ ထိတွေ့မှု နည်းပါးခဲ့တယ်။ အလွန်ဆုံးထိတွေ့ရတာ ယိုးဒယား။
ဒါပေမယ့် ရှေးမြန်မာတွေဟာ ပြင်ပက ၀င်လာတဲ့ ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ အတွေးအခေါ်တွေကို အသစ်အဆန်းအနေနဲ့ စိတ်ဝင်တစား လက်ခံကြပုံရတယ်။ ဇာတ်၊ ဂီတ၊ အက စတဲ့ သုခုမ အနုပညာတွေမှာ ရှေးခေတ်မြန်မာပြည်နဲ့ ထိတွေ့ခဲ့ရသမျှ နိုင်ငံတွေက ယဉ်ကျေးမှုတွေ ရောယှက်နေတာကို သတိထားနိုင်ပါတယ်။ ဒီလို လက်ခံနိုင်ကြတာဟာလည်း မြန်မာတွေရဲ့ စိတ်မှာ (သက်ဦးဆံပိုင်ဘုရင်စနစ်အောက်မှာ နေရတာဖြစ်သော်ငြား) ငါတို့လူမျိုးဟာ “ကိုယ့်ထီး၊ ကိုယ့်နန်း၊ ကိုယ့်ကြငှန်း” နဲ့ နေနိုင်တဲ့ လူမျိုးတွေရယ်လို့ လွတ်လပ်တဲ့ လူမျိုးစိတ်နေစိတ်ထားရှိလို့ ပွင့်လင်းစွာ လက်ခံနိုင်ကြတာ ဖြစ်ပုံရပါတယ်။
ဒီလိုနဲ့ မြန်မာပြည်ဟာ အင်္ဂလိပ်လက်အောက်ကို ကျရောက်ခဲ့ရတယ်။ တလျှောက်လုံး ကိုယ့်ထီး၊ ကိုယ့်နန်း၊ ကိုယ့်ကြငှန်း နဲ့ နေလာသူတွေဟာ သူ့ကျွန်ဘ၀ကို ရောက်သွားတဲ့အခါ စောစောက လွတ်လပ်တဲ့လူမျိုး စိတ်နေစိတ်ထားဟာ အချိုးနှိမ်ခံလိုက်ရတော့တယ်။ ဒါပေမယ့် ကိုယ့်လူမျိုးကို မတရားလာရောက်အုပ်ချုပ်ပြီး ကိုယ်တိုင်းပြည်က သယံဇာတ၊ အမွေအနှစ်တွေကို အမြတ်ထုတ်တဲ့ နယ်ချဲ့ကို မြန်မာတွေ မနှစ်မြို့နိုင်ကြပါဘူး။ ပိုဆိုးတာက အင်္ဂလိပ်တွေခေတ်မှာ အိန္ဒိယကနေ ရောက်လာတဲ့ ငွေရှင်ချစ်တီးတွေရဲ့ ဖိနှိပ်မှုကြောင့် မြန်မာတွေရဲ့ တိုင်းတပါးသားတွေအပေါ်မှာ မနှစ်မြို့စိတ်၊ မုန်းတီးစိတ်ဟာ ပိုမိုပြင်းထန်လာခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီမှာ “၀ံသာနုစိတ်” ဆိုတာ စတင်ပေါ်ပေါက်လာတော့တာပါပဲ။ “၀ံသာနုစိတ်” ဆိုတာ “ကိုယ့်အမျိုး၊ ကိုယ့်ဘာသာ၊ ကိုယ့်သာသနာ၊ ကိုယ့်ယဉ်ကျေးမှု” ကို ကာကွယ်လိုတဲ့စိတ်ကို အရင်းခံတယ်။ ဒါကြောင့် ကိုလိုနီခေတ် အစောပိုင်း မြန်မာ့နိုင်ငံရေး လှုပ်ရှားမှုမှာ “အမျိုး၊ ဘာသာ၊ သာသနာ” ဆိုတဲ့ ကြွေးကြော်သံဟာ ကျယ်လောင်နေခဲ့တယ်။ အဲဒီ ၀ံသာနုစိတ်ဓါတ်ရေချိန်မြင့်လာတဲ့ အချိန်မှာ တိုင်းတပါးသား အုပ်ချုပ်သူတွေရဲ့ ထုတ်ကုန်တွေ၊ ဘာသာစကားတွေ၊ ယဉ်ကျေးမှုတွေကို စတင် သပိတ်မှောက်ကြတော့တယ်။ ပြည်တွင်းဖြစ်ကို အားပေးလာကြတယ်။ အဲသည်ခေတ်အနေအထားကို ပြန်ကြည့်ရင် ဒီ ၀ံသာနုစိတ်ပေါ်ပေါက်လာပုံဟာ သဘာဝ ကျတယ်။ နောက်ပြီး မြန်မာ့လွတ်လပ်ရေးအတွက်လည်း အခရာ ကျခဲ့တယ်။
ဒါပေမယ့် မြန်မာ့လွတ်လပ်ရေးအတွက် ရုန်းကန်ခဲ့ရတဲ့ ကာလဟာ အတော်အတန် ရှည်လျားခဲ့တာမို့ အဲသည် ပြင်းထန်တဲ့ ၀ံသာနုစိတ်ဟာ လွတ်လပ်ရေးရပြီးတဲ့ အချိန်အထိ အရှိန်မကုန်နိုင်သေးဘဲ အရိုးစွဲပြီး ကျန်ရစ်ခဲ့တယ်။
တကယ်လို့သာ မြန်မာပြည်ဟာ လွတ်လပ်ပြီးချိန်က စလို့ လွတ်လပ်တဲ့ လူမျိုးတရပ်အနေနဲ့ ပြင်ပကမ္ဘာနဲ့ ကူးလူးဆက်ဆံမှုတွေ ကာလရှည်ကြာ ဆက်လုပ်နိုင်ခဲ့ရင် ကျနော်တို့ မြန်မာတွေဟာ ပုဂံခေတ်က မြန်မာတွေလိုပဲ ကမ္ဘာတလွှားက ယဉ်ကျေးမှုတွေ၊ အတွေးအခေါ်တွေကို သဘောထားကြီးကြီး၊ ပွင့်လင်းတဲ့အမြင်နဲ့ လက်ခံနိုင်ကြမှာ အသေအချာပါ။
ကံဆိုးချင်တော့ မြန်မာပြည်ဟာ လွတ်လပ်ရေးရပြီး မကြာခင်မှာဘဲ စစ်အာဏာရှင်အစိုးရတက်လာပြီး မြန်မာလူမျိုးအချင်းချင်း ဖိနှိပ်အုပ်ချုပ်ခြင်းကို ခံရပါတော့တယ်။ စစ်အစိုးရဟာ အရပ်သား မျက်နှာဖုံး မြန်မာ့ဆိုရှယ်လစ် လမ်းစဉ်ပါတီကို ထူထောင်ပြီး တံခါးပိတ်စီးပွားရေးစနစ်ကျင့်သုံးကာ မြန်မာပြည်သူတွေကို ပြင်ပကမ္ဘာနဲ့ အဆက်ဖြတ်လိုက်ရုံမက ကျဉ်းမြောင်းတဲ့ အမျိုးသားရေးစိတ်ဓါတ်ကို မြန်မာလူမျိုးတွေ စိတ်ထဲကို ၂၆ နှစ်လုံးလုံး ၀ါဒဖြန့် သွတ်သွင်းခဲ့ပါတယ်။ ကျောင်းသင်ခန်းစာတွေ၊ စာနယ်ဇင်းတွေကအစ ရုပ်ရှင်၊ ဂီတ နဲ့ သုခုမ အနုပညာတွေအဆုံး တိုင်းတပါးယဉ်ကျေးမှု၊ တိုင်းတပါး အတွေးအခေါ်တွေကို ရှုတ်ချပြီး “အရိုးပေါ် အရွက်မဖုံးစေနဲ့” ဆိုတဲ့ စကားအတိုင်း ခေတ်နောက်ပြန်ဆွဲတဲ့ ဓလေ့ကို ရိုက်သွင်းခဲ့တယ်။ နိုင်ငံရပ်ခြားက တိုးတက်မှုတွေ၊ ယဉ်ကျေးမှုတွေ၊ အတွေးအခေါ်အယူအဆတွေ မြန်မာပြည်ထဲ ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်မလာနိုင်အောင် စာပေစိစစ်ရေး၊ ရုပ်ရှင်ဆင်ဆာ စတဲ့ အဆင့်ဆင့်သော တည်းဖြတ်မှုတွေနဲ့ ပြည်သူတွေရဲ့ မျက်စိနဲ့ နားကို ၂၆ နှစ်လုံးလုံး ပိတ်ပင်ထားခဲ့တယ်။ အကျိုးဆက်ကတော့ ကျနော်တို့တတွေဟာ အသစ်အဆန်းကို လက်ခံဖို့ တွန့်ဆုတ်ကြတယ်။ တိုင်းတပါးယဉ်ကျေးမှုဆိုရင် အလွယ်တကူ ရှုတ်ချတတ်ကြတယ်။ အတွေးအခေါ်အသစ်တွေကို စဉ်းစားဆန်းစစ် လက်ခံဖို့ ၀န်လေးကြတယ်။
ဆွံ့အနားမကြား ဆိုတာ ကြားဖူးပါလိမ့်မယ်။ လူတယောက်ဟာ မွေးကတည်းက နားမကြားရင် စကားမပြောတတ်တော့သလို မျက်စိမမြင်ရင်လည်း ပတ်ဝန်းကျင်က အဖြစ်အပျက်တွေကို မသိနိုင်တော့ပါဘူး။ လေ့လာသင်ယူနိုင်ဖို့ မလွယ်ကူပါဘူး။ မျက်စိရော၊ နားပါ ချွတ်ယွင်းသွားခဲ့ရင် လူအဖြစ် ပြည့်ပြည့်၀၀ ရှင်သန်ကြီးထွားနိုင်ဘို့ မလွယ်တော့ပါဘူး။ (စိတ်ဝင်စားသူများ Helen Keller's teacher- ဖေမြင့် ဘာသာပြန်- ဟယ်လင်ကဲလား၏ ဆရာမ ကို ရှာဖတ်ပါ။) မှန်မှန်ကန်ကန် မမြင်မကြားရရင် ဆုံးဖြတ်မှုလွဲမှားနိုင်တယ်ဆိုတာကလည်း အထူးပြောဖို့တောင် မလိုပါဘူး။
ကျနော်တို့ မြန်မာပြည်သူတွေဟာ မိမိတို့ရဲ့ အခွင့်အရေးတွေကို နားမလည်ကြဘူးလို့ ဆိုလာရင် ကျနော်တို့ဟာ နားမျက်စိကို နှစ်ရှည်လများ အပိတ်ခံထားရတဲ့ အတွက်ကြောင့်သာ ဖြစ်ပါတယ်။ နားမျက်စိကို ဖွင့်ပေးလိုက်တာနဲ့ ဘယ်ဟာ ကောင်းသလဲ၊ ဘယ်ဟာဆိုးသလဲဆိုတာ ချက်ချင်းသိကြမှာပါ။ မှန်မှန်ကန်ကန် ဆုံးဖြတ်နိုင်ကြမှာပါ။ ပုဂံခေတ်က အရည်းကြီးသာသနာကနေ ဗုဒ္ဓသာသနာကို အချိန်တိုအတွင်းမှာ ပြောင်းလဲသွားသလိုမျိုးပေါ့။
ဒါကြောင့် တချို့လူတွေ ၀ါဒဖြန့်နေတဲ့ “မြန်မာတွေ ဒီမိုကရေစီနဲ့ မထိုက်တန်ဘူး” ဆိုတဲ့ အယူအဆဟာ လုံးဝ မမှန်ကန်ပါဘူး။
ပြည်သူလူထုရဲ့ နားမျက်စိကို ဖွင့်ပေးမယ်၊ လွတ်လပ်တဲ့ လူမျိုးဘ၀ကို ပြန်ရအောင် ဖန်တီးနိုင်မယ်ဆိုရင် ကျနော်တို့ တိုင်းပြည်ဟာ ကမ္ဘာတလွှားက လွတ်လပ်တဲ့ အခြားတိုင်းနိုင်ငံတွေလိုပဲ တိုးတက်တဲ့ ယဉ်ကျေးမှု၊ ရင့်ကျက်တဲ့ အတွေးအမြင်တွေနဲ့ နေချင်စရာကောင်းတဲ့ တိုင်းပြည်တခုအဖြစ်ကို အမြန်ဆုံး ရောက်ရှိလာမှာ အမှန်ပါပဲ။
အဲဒီလို မျက်စိဖွင့်ပေးနိုင်ဖို့အတွက် (တနည်း) လွတ်လပ်တဲ့ လူမျိုးဘ၀ကို ပြန်ရအောင် လုပ်နိုင်ဖို့အတွက် လုပ်ရမယ့် ပထမဦးဆုံးအဆင့်ကတော့ ပြည်သူတွေရဲ့ မျက်စိနဲ့နားကို ပိတ်ထားတဲ့စနစ် (သို့မဟုတ်) လွတ်လပ်မှုကို ပိတ်ပင်ထားတဲ့ စနစ်ကို အရင် ဖြိုဖျက်၊ တိုက်ဖျက်ကြဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီအဆင့်ဟာ မြန်မာပြည်ကို ချစ်သူတိုင်း၊ လွတ်လပ်မှုကို မြတ်နိုးသူတိုင်း မဖြစ်မနေ ပူးပေါင်းပါဝင်ရမယ့် အဆင့်ဖြစ်မယ်လို့ ယူဆမိပါတယ်။
Labels: political post Comments: (12)
အင်တာနက်ပေါ်က ဓါတ်ပုံတပုံထဲမှာ ချစ်စဖွယ်ပြုံးရင်း မျက်လုံးလေး ထောင့်ကပ်ပြီး ကြည့်နေရှာတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေကို ဆံပင်ဒီဇိုင်းသစ်နဲ့ လိုက်ဖက်လေမလားလို့ Paint Brush သုံးပြီး စမ်းသပ် တီထွင်ကြည့်တာပါ။ မြန်မာမှု၊ မြန်မာဟန် အရိပ်အငွေ့လေးတွေ ပါအောင် ကြိုးစားထားပါတယ်။ မူရင်း ဓါတ်ပုံကိုတော့ ဒီမှာ ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ အိပ်ဆောင်ပြက္ခဒိန်ထုတ်လိုသူများ အမြန်ဆက်သွယ်ကြပါ။း-)
Posted by ကိုပေါ on Monday, July 27, 2009
မြန်မာပြည် အစွန်အဖျား တောကြိုအုံကြားအရပ်မှ မွေးကင်းစကလေးငယ်တဦးကို လန်ဒန်တွင်ခေါ်၍ ကြီးပြင်းစေပြီး ပညာသင်ကြားပေးလိုက်လျှင် ထိုကလေးငယ်သည် အင်္ဂလိပ်လူမျိုး မိဘနှစ်ပါးမှ မွေးဖွားလာသော ကလေးငယ်နှင့်မခြား အင်္ဂလိပ်ဘာသာကို ကျွမ်းကျင်စွာပြောဆိုနိုင်ပြီး အင်္ဂလိပ်လူမျိုး ကလေးငယ်များနည်းတူပင် ပညာတတ်မြောက်လာမည် ဖြစ်သည်။
အဆိုပါကလေးငယ်ကိုပင် မွေးကင်းစအရွယ်၌ တောတွင်းမှ လူဝံများအကြားတွင် သွားရောက်ထားရှိကာ ကြီးပြင်းစေပါက လူစကားကိုပင် ပြောတတ်တော့မည်မဟုတ်ဘဲ တာဇံကဲ့သို့ လူဝံဘာသာစကားနှင့် တောဓလေ့ တောစရိုက်အတိုင်းသာ ပြုမူဆက်ဆံနိုင်တော့မည် ဖြစ်သည်။
မြန်မာလူမျိုးကလေးငယ်မှမဟုတ်၊ ဥရောပလူမျိုး မိဘများမှ မွေးဖွားလာသော အခြားကလေးငယ်များကို အလားတူစမ်းသပ်လျှင်လည်း တူညီသော ရလဒ်ကိုသာ မြင်တွေ့ကြရမည်ဖြစ်ပေသည်။
တဖန် တောတွင်းတွင် ကြီးပြင်းခဲ့ရသော လူကလေးအား လူ့ယဉ်ကျေးမှု အသိုင်းအ၀ိုင်းသို့ ခေါ်ယူကာ လူ့ဘာသာစကားကို သင်ကြားပေးလျှင် မကြာမီအချိန်အတွင်းမှာပင် လူစကားကို ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင် ပြောဆိုလာနိုင်ပေလိမ့်မည်။ အစပိုင်းတွင်တော့ လူတို့၏ အလေ့အထနှင့် အံဝင်ခွင်ကျမရှိသဖြင့် ကို့ယို့ကားယား၊ ကမောက်ကမ အဖြစ်အပျက်များ ရှိပေလိမ့်မည်။ သို့သော် ဤသည်မှာ ခေတ္တခဏသာလျှင် ဖြစ်သည်။ လူဆိုသည်ကား အမှားမှနေ၍ သင်ခန်းစာယူတတ်သော၊ လေ့လာသင်ယူတတ်သော သဘော ကိုယ်စီရှိကြသည်။ လူသည် ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လိုက်လျောညီထွေ ရှင်သန်နိုင်စေရန် မိမိကိုယ်ကို ပြုပြင်တတ်သော သဘောရှိသည်။ အချိန်ကာလ တခုကို လွန်မြောက်သွားလျှင် တာဇံအနေဖြင့် မူလသဘာဝဖြစ်သော တောတွင်းသားကလေးအဖြစ်ကို မမှတ်မိနိုင်တော့လောက်အောင်ပင် ယဉ်ကျေးချက်ချာသော မြို့သားလူငယ်ကလေးတဦးအဖြစ် တိုးတက် ပြောင်းလဲသွားပေလိမ့်မည်။ ဤသည်ကား ကျွန်ုပ်တို့၏ တွေးခေါ်ယူဆပုံ ဖြစ်ပါသည်။
အချို့သူများ၏ ကွဲပြားခြားနားသော စဉ်းစားတွေးခေါ်ပုံလည်း ရှိသေးသည်။ ထိုသူတို့ အလိုအရ တာဇံသည် တောတွင်းသားမို့ လူစကားကို ချက်ချင်း နားမလည်နိုင်။ ထို့ကြောင့် လူကြားထဲကို ချက်ချင်းခေါ်လို့မဖြစ်။ လူဝံများထက် အတန်ငယ် ပိုမို၍ ယဉ်ပါးသော ကျွဲနွား စသည်တို့အကြားတွင် ငါးနှစ်ခန့် ရှေးဦးစွာ ကြီးပြင်းစေရမည်။ နွားအလေ့နွားအထနှင့် ယဉ်ပါးလာမှ တဆင့်တက်၍ ထို့ထက်ပိုမို ယဉ်ပါးဟန်ရှိသော ခွေးကြောင်တို့ အကြားတွင် နေစေမည်။ ထိုမှတဆင့် နှစ်အတန်ကြာသောအခါ လူရိုင်းမျိုးနွယ်စုတွေအကြား နေစေရဦးမည်။ နောက်ဆုံးကျမှ ယဉ်ကျေးတိုးတက်သော လူ့အသိုင်းအ၀ိုင်းကြားတွေ နေစေမည်။ ဤအတွေးအခေါ်သည် အင်မတန် ရယ်ဖွယ်ကောင်းသော အတွေးအခေါ်ပင်ဖြစ်ပါသည်။ အချို့လည်း ကိုပေါ ဒါတော့ လွန်လွန်းပြီဟု ဆိုကြပေမည်။ သို့သော်မရယ်ကြပါလင့်။ ပီအိတ်ခ်ျဒီ ဒေါက်တာကြီးများတွင်ပင် ထိုအတွေးအခေါ်နည်းတူ တွေးခေါ်သူ အမြောက်အမြား ရှိကြပေသည်။
ကျွန်ုပ်တို့ မြန်မာပြည်သူပြည်သားများ၏ အဖြစ်ကို ပုံခိုင်းနှိုင်းပြရသော ချမ်းသာ၍ ယဉ်ကျေးသော မိဘနှစ်ပါးမှ ပေါက်ဖွားလာသော်လည်း လူမသမာသူတစုက ပြန်ပေးဆွဲကာ တောထဲတွင် ချုပ်နှောင်ခံထားရသော တောတွင်းသား ကလေးငယ်သဖွယ် ဖြစ်နေပေသည်။
ထိုမြန်မာပြည်သူပြည်သားတို့ကို ကမ္ဘာတလွှားမှ လူသားများနည်းတူပင် လွတ်လပ်ခွင့်၊ အသက်ရှင်သန်ပိုင်ခွင့်၊ ကိုယ့်ကြမ္မာကိုယ်ဖန်တီးခွင့်တို့ကို စက္ကန့်မဆိုင်း ပေးစွမ်းသင့်ပေသည်။ ဤအခွင့်အလမ်းတို့ကို အာမခံနိုင်သည်မှာ ဒီမိုကရေစီစနစ်သာလျှင် ရှိသည်။ တောတွင်းသားကလေးကို လူ့အသိုင်းအ၀ိုင်းအတွင်းတွင် စတင်ခေါ်ဆောင်ကာစ၌ ကမောက်ကမ အဖြစ်အပျက်များ ကြုံတွေ့ရသည့်နည်းတူ အာဏာရှင်စနစ်အောက်မှ လွတ်မြောက်ကာစ တိုင်းပြည်တခုအဖို့ ဒီမိုကရေစီစနစ်ကို စတင်ကျင့်သုံးကာစ၌ ကမောက်ကမ အဖြစ်အပျက်များကို ကြုံတွေ့နိုင်ပေသေးသည်။ သို့သော် ထိုသို့ ကမောက်ကမ အဖြစ်အပျက်ကို တွေ့ရုံမျှနှင့် နောက်လန်မကျသွားပဲ ဒီမိုကရေစီစနစ်ကို ခိုင်မာရင့်သန်စွာ အမြစ်တွယ်နိုင်သည်အထိ ဇွဲနပဲဖြင့် စိတ်လက်ရှည်ရှည် ကြိုးပမ်းသွားရန်လည်း လိုအပ်လှပေသည်။
သို့သော်ငြား ပညာရှင်ဆိုသူအချို့၏ အလိုအရမူကား မြန်မာပြည်သူပြည်သားတို့အား လုံးဝ လွတ်လပ်ရေး ပေးလိုက်ရန် မထိုက်တန်။ ပထမတွင် အပျော့စားအာဏာရှင်စနစ်နှင့် အုပ်ချုပ်ရမည် (သို့တည်းမဟုတ်) စည်းကမ်းရှိသော ဒီမိုကရေစီ (သို့တည်းမဟုတ်) မြန်မာ့အမျိုးသားရေးဝါဒနှင့် ကိုက်ညီသော ဒီမိုကရေစီ စနစ်ကို အရင်သွားရမည်။ တဖြည်းဖြည်း ရင့်ကျက်လာမှ လုံးဝ စစ်မှန်သော ဒီမိုကရေစီ စနစ်သို့ အဆင့်ဆင့် သွားရမည် ဟူသတည်း။ သန်းငါးဆယ်၏ ကံကြမ္မာကို ကွန်ပြူတာရှေ့တွင် အမြိုင့်သားထိုင်၍ ထိုသို့ စီရင်ချက်ချ ဆုံးဖြတ်လျက်ရှိသော လက်တဆုပ်စာ ခုံသမာဓိ လူကြီးမင်းများ၏ စကားကို ကြားရတိုင်း ကျွန်ုပ်အတွေးထဲတွင် ကျွဲနွားများအကြား၊ ခွေးကြောင်များအကြားတွင် ကာလရှည်ကြာ ပစ်ထားခံရရှာသော ကလေးငယ်တဦး၏ ပုံရိပ်ကို ပြေးမြင်မိလေသည်။
“မုဆိုးမဘ၀ကို မုဆိုးမများသာလျှင် အကြောင်းသိကြသည်။”
ဂျာနယ်ကျော်မမလေး ရေးသားသည့် မုဆိုးမ ၀တ္ထုတိုထဲက စာသားများသည် ယခုတလော ကျနော့် နားထဲတွင် ပဲ့တင်ထပ်နေသည်။ ကျနော်ကတော့ ဒီလို ပြောချင်သည်။
“မြန်မာအစိုးရအကြောင်းကို မြန်မာများသာလျှင် သိသည်။”
မှန်၏။ မြန်မာအစိုးရ၏ သဘောသဘာဝကို အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဟီလာရီ ကလင်တန်လည်းမသိ။ ဂန်ဘာရီလည်း နားမလည်။ ဘန်ကီမွန်းလည်း သဘောပေါက်ပုံမရ။ သန့်မြင့်ဦးလည်း သေချာဂဃဏနမသိ။ အဘယ်ကြောင့်ဟူမူ ထိုသူတို့သည် မြန်မာပြည်တွင်မွေး၍ မြန်မာပြည်တွင် ကြီးပြင်းသော မြန်မာလူမျိုးများ မဟုတ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
မြန်မာအစိုးရအကြောင်းကို ဘယ်သူတွေသိသနည်းဟူမူ မြန်မာလူမျိုးများသာ ကောင်းကောင်းကြီး သိပေသည်။ မြန်မာအစိုးရ၏ ဒီယုန်မြင်လို့ ဟိုခြုံထွင်တာကိုလည်း မြန်မာပြည်သူ ကောင်းကောင်းသိ၏။ မြန်မာအစိုးရ၏ အရှက်မရှိပုံ၊ ကတိမတည်ပုံ၊ ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်ပုံ၊ သဘောထားနုပုံတို့ကို မြန်မာပြည်သူများ ကောင်းကောင်းသိ၏။
နိုင်ငံခြား သံတမန်များနှင့် ပညာရှင်ဆိုသော လူတန်းစားတွင် အတ္တတခု ကိုယ်စီရှိကြသည်။ ယင်းမှာ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးကို လက်ရှိ ရပ်တန့်နေသော အနေအထားမှ ရွေ့လျားရေးအတွက် ၄င်းတို့၏ စွမ်းဆောင်မှု (သို့မဟုတ်) ၄င်းတို့၏ သီအိုရီအရ ပြောင်းလဲနိုင်သည်ဟု ပြောဆိုနိုင်ရေးသည်သာ သူတို့အတွက် ပဓာနကျပုံရသည်။ ထိုသို့ ပြောဆိုနိုင်ရန်အတွက် မြန်မာ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေ မည်သို့မည်ပုံ ပြောင်းလဲသည်ကို အရေးမစိုက်။ လက်ရှိအနေအထားမှ တနည်းတဖုံ ရွေ့ရှားသွားလျှင်ပင် ကျေနပ်ဖွယ်ရှိသည်ဟု ယူဆလျက်ရှိရာ ယင်းသံတမန်များ၊ ဖြန်ဖြေရေးအရာရှိများ၊ ပညာရှင်ဆိုသူများသည် မြန်မာအစိုးရ၏ လမ်းပြမြေပုံကိုပင် မျက်နှာပြောင်ပြောင်ဖြင့် ၀င်ရောက် ကြော်ငြာပေးလျက် ရှိသည်။
ယခုတလော သံတမန်အသိုင်းအ၀ိုင်းနှင့် ပညာရှင်များ၏ နှုတ်ဖျားတွင် ရေပန်းစားနေသည်မှာ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲအား အားလုံးပါဝင်နိုင်သော ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်ရေး၊ လွတ်လပ်ပြီး တရားမျှတသော ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်ရေးကို တွန်းအားပေးနေသည့် စကားလုံးများဖြစ်သည်။ စစ်အစိုးရမှ တဖက်သတ်ရေးဆွဲကာ ၂၀၀၈ ခုနှစ်မေလတွင် မတရားမဲလိမ်ပြီး အတင်းအကြပ်ပြဌာန်းခဲ့သော စစ်တပ်က အလုံးစုံ အာဏာလက်ဝါးကြီးအုပ်ထားသည့် အခြေခံဥပဒေကို စကားထဲတွင်ပင် ထည့်သွင်း၍ မပြောကြ။ ထိုသူတို့မှာ အတိတ်မေ့တတ်သော ရောဂါရှိသလော မပြောတတ်။ အိပ်ချင်ယောင်ဆောင်နေကြသူများကို အနှိုးရခက်လှပေသည်။
ဟီလာရီကလင်တန်၏ ပြောကြားချက်နှင့်ပတ်သက်၍ ဧရာဝတီအွန်လိုင်းမဂ္ဂဇင်း သတင်းတပုဒ်တွင် ဖော်ပြထားသော အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်မှ ဦးဝင်းတင်၏ ပြောကြားချက်မှာ ကျွန်ုပ်၏ ထင်မြင်ချက်နှင့် တထပ်တည်းကျသည်။
ဟီလာရီ ကလင်တန်၏ ပြောဆိုချက်ကို ရန်ကုန်မြို့မှ ဒီမိုကရေစီ လှုပ်ရှားမှု ခေါင်းဆောင်များကလည်း အားရ ကျေနပ်မှု မရှိပေ။ ထိုပြောဆိုချက်မှာ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏ မူဝါဒရေးဆိုင်ရာ အားနည်းမှုကို ဖော်ပြနေသည်ဟု အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ခေါင်းဆောင် တဦးဖြစ်သူ ဦးဝင်းတင်က ယူဆသည်။
“အမျိုးသား ပြန်လည် သင့်မြတ်ဖို့အတွက် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးဆိုတဲ့ အချက်ကို ဘယ်သွားထားမလဲ။ ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ တိုင်းရင်းသားအရေးတွေလည်း ရှိသေးတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ပြန်ဖမ်းနိုင်တယ်ဆိုတာကို သူတို့ မသိဘူးလား”ဟု ဦးဝင်းတင်က ဧရာဝတီကို ပြောသည်။
ဤသည်မှာ သံတမန်ရေး နိုင်ငံရေးနယ်ပယ်မှ လူများ၏ လက်ရှိအနေအထားအပေါ် သုံးသပ်ချက်နှင့် ပတ်သက်၍ အတိုချုပ်ရေးသားပြခြင်းဖြစ်သည်။
ပညာရှင်ဆိုသောလူများနှင့် ပတ်သက်၍ကား သိပ္ပံမောင်ဝ၏ “စာသင်ကျောင်း” ဟူသော ၀တ္ထုတိုထဲမှ နိဂုံးလေးကို သတိရမိသည်။ အချုပ်ကို ကျနော်မှတ်မိသလောက် ရေးပြပါမည်။
ဆရာစော၏ စာသင်ကျောင်းတွင် ဆရာက ကျောင်းသားများအပေါ် အာရုံမစိုက်နိုင်သောအခါ ကျောင်းသားများသည် ဆော့သူက ဆော့၊ စကားပြောသူက ပြော၊ ရန်ဖြစ်သူကဖြစ် ဖြစ်ချင်တိုင်း ဖြစ်နေကြသည်။ ဤသို့ဖြင့် မူလက စာအံသံကြီးသည် တဖြည်းဖြည်း ဆူညံသံကြီးအဖြစ် ပြောင်းလဲသွားသည်။ ထိုအခါ ဆရာစောသည် လုပ်လက်စ အလုပ်ကို ခဏရပ်၍ ကြမ်းပြင်ကို ကြိမ်လုံးဖြင့် ဘမ်းဘမ်း မြည်အောင် ရိုက်လိုက်သောအခါ ကျောင်းသားတို့သည် ရောက်ရာအရပ်ကနေ မိမိတို့ ပါးစပ်ထဲဝင်လာသမျှ စာမှန်သမျှကို ကုန်း၍ အသံကုန် အော်ဟစ် ကျက်မှတ်ကြသည်။ ဤသို့ဖြင့် ဆူညံသံကြီးမှ စာအံသံကြီးအဖြစ်သို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိသွားလေသည်။
ဤသို့ တလှည့်စီဖြစ်နေရာ စာသင်ကျောင်းအနီး သူကြီးအိမ်တွင် မိုးအေးအေးနှင့် ကွေးနေသော ၀န်ထောက် မောင်လူအေးအဖို့မူကား ငှက်ဆိုးထိုးသံကြီးလို ဖြစ်နေသည်။ ထို့ကြောင့် သူကြီးအား မောင်လူအေးက “သူကြီးမင်း…. ဒီဆရာ စာသင်ပုံနဲ့ ကျောင်းသားတွေ စာရော တတ်ပါ့မလား”ဟုမေးရာ သူကြီးက “ အထိုက်အလျောက်တော့ တတ်ပါတယ်… ၀န်ထောက်မင်း”ဟု ပြန်ဖြေသည်ဟူ၏။ ကျနော်နှစ်ခြိုက်သောအချက်မှာ စာရေးဆရာက နိဂုံးတွင် “မောင်လူအေးသည် သူငယ်စဉ်ကလည်း ဤကျောင်းမျိုးမှပင် စာသင်ကြားတတ်မြောက်လာခဲ့သည်ဟူသော အချက်ကို မေ့နေဟန်တူ၏” ဟု ရေးသားထားခြင်း ဖြစ်သည်။
ပြည်ပတွင်ရောက်နေသော ပညာရှင်ဆိုသူများ၊ ပညာရှင်စိတ်ပေါက်နေကြသူများမှာ မောင်လူအေးနှယ်ပင် မိမိတို့ ငယ်ငယ်ကလည်း ဤမြေဤရေမှ ပေါက်ဖွားလာကြသည်၊ ပညာသင်ကြားတတ်မြောက်လာကြသည်ဟူသော အချက်ကို မေ့နေကြဟန်တူသည်။
တလောကပင် ထိုသို့သော လူတဦးနှင့် စကားလက်ဆုံကျမိရာ “မြန်မာတွေက အေ၊ဘီ၊ စီ တောင် ကောင်းကောင်းနားမလည်သေး၍ ပြည်သူလူထုအား ဒီမိုကရေစီအကြောင်း ပြောပြရန် မဖြစ်နိုင်” ဟု ဆိုလာသည်ကို ကြုံရသေးသည်။ ကျွန်ုပ်က အစိုးရတရပ် ကောင်းမကောင်းသိရန် ပီအိပ်ခ်ျဒီ ရရန် မလိုကြောင်း၊ သာမန်ဖိနှိပ်ခံ လယ်သမားများအနေဖြင့်လည်း စနစ်တခု ကောင်းမကောင်းကို နားလည်သဘောပေါက်ရန် ဖြစ်နိုင်ကြောင်း ထောက်ပြသောအခါ “ထိုစကားသည် အင်္ဂလန်မှ လယ်သမားများအတွက်သာ မှန်သည်။ မြန်မာလယ်သမားများအတွက်ကား မမှန်” ဟု ဆိုချေသည်။ ဤအတိုင်းမှန်ပါက ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲတွင် အဖွဲ့ချုပ်မှ အပြတ်အသတ်အနိုင်ရခဲ့သည်မှာ အဘယ့်ကြောင့်နည်းဟု ကျွန်ုပ်က ပြန်လည် မေးမြန်းသောအခါ သူ့တွင် အဖြေမရှိတော့ချေ။
ဤနေရာတွင် စကားစပ်မိ၍ ပြောရလျှင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ဒီမိုကရေစီအကြောင်း၊ လူ့အခွင့်အရေးအကြောင်းကို ပြည်သူလူထုအားလုံးနားလည်စေရန် နေ့စဉ်သုံးမြန်မာစကားဖြင့်ပင် လည်လည်ပတ်ပတ် ပြောပြနိုင်ခြင်း ဖြစ်ပေသည်။ ဤကား ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ အရည်အချင်းပေါင်း မြောက်မြားစွာမှ တခုပင်တည်း။
အထက်ပါ ပုဂ္ဂိုလ်၏ အလိုအတိုင်းသာဆိုလျှင် ကျွန်ုပ်တို့မှာ မြန်မာပြည်သူများ ဒီမိုကရေစီစနစ်နားလည်ဖို့အရေး အားလုံးကို အင်္ဂလိပ် အသုံးလုံး အရင်သင်ပေးရကိန်းရှိသည်။
ကျွန်ုပ်တို့ မြန်မာပြည်သူများသည် အာဏာရှင်လက်အောက်တွင် ရာစုနှစ်ဝက်နီးပါး နေလာကြရ၍ ဒီမိုကရေစီအကြောင်း၊ လူ့အခွင့်အရေးအကြောင်းများနှင့် အလှမ်းကွာကြသည်မှာ မှန်၏။ သို့သော် ပြောပြ၍ နားမလည်လောက်အောင် ထူထိုင်းကြသည်မဟုတ်။ မြန်မာလူမျိုးသည် ထူထိုင်းသည့် လူမျိုးမဟုတ်။ ဤမျှ ဆိုးရွားလှသော ပညာရေးစနစ်မှ ပညာသင်ကြားတတ်မြောက်လာသူများပင် ပြည်ပတွင် သူများတန်းတူ လုပ်ကိုင်နိုင်ကြသည်၊ စွမ်းဆောင်နိုင်ကြသည်ဖြစ်သည်။ ပြည်သူများကို ပညာပေးရန်၊ နိုင်ငံရေးအသိစိတ်မြင့်တက်လာအောင် လှုံ့ဆော်ရန်မှာ ပညာတတ်မြန်မာများ၊ နိုင်ငံရေးအသိစိတ်ရှိသူများ၏ တာဝန်ဖြစ်သည်။
နိုင်ငံတကာမှ ဖိအားပေးမှုများသည် စစ်အစိုးရအား ဘေးကြပ်နံကြပ်ဖြစ်စေသည်မှာ မှန်သော်လည်း နိုင်ငံရေးအပြောင်းအလဲတရပ် အမှန်ဖြစ်ရန်မှာ ကျွန်ုပ်တို့ ပြည်သူအားလုံးတွင်သာ တာဝန်ရှိသည်။
Posted by ကိုပေါ on Saturday, July 25, 2009
Labels: distribution Comments: (12)
ကျွန်ုပ်နှင့် ဓါတ်ပုံပညာအကြောင်းကို ရေးရန် စိတ်ကူးရခဲ့သည်မှာ ကြာပြီ။ သို့သော် ကျွန်ုပ်လက်ရာများကို မြင်လျှင် ဓါတ်ပုံပညာကို အမှန်တကယ် စိတ်ဝင်တစား လိုက်စားနေကြဟန်တူသော ဘလော့ဂါလူငယ်လေးများအဖို့ သိမ်ငယ်စိတ် ၀င်သွားချေမည်လောဟု စိုးရိမ်သဖြင့် ကျွန်ုပ်၏ ပညာစွမ်းကို ထုတ်ဖော်မပြသ၀ံ့ဘဲ ကြောင်လက်သည်းဝှက် သိုသိပ်စွာ နေခဲ့ပါသည်။ ယခုတော့ သင်းတို့တတွေလည်း အတော်အသင့် ရင့်ကျက်လာပြီဟု ယူဆသည့်အလျောက် ကျွန်ုပ်၏ ဂန္ထ၀င်လက်ရာအချို့ကို စာဖတ်သူများ ခံစားနိုင်ရန် ကောင်းနိုးရာရာ ထုတ်နှုတ် တင်ပြလိုက်ပါသည်။ မုဒိတာစိတ်အပြည့်ဖြင့် ကြည့်ရှု နည်းယူကြပါကုန်လော့။
ရှေးဦးစွာ ကျွန်ုပ်၏ ပထမဦးဆုံး ကင်မရာ အကြောင်းကို အနည်းငယ် ပြောပြလိုပါသည်။ လွန်ခဲ့သော ဆယ့်သုံးနှစ် မလေးရှားတွင် နေထိုင်စဉ်က သူငယ်ချင်းလေးယောက် စုပေါင်းစပ်ပေါင်း၍ ၀ယ်ယူခဲ့သော ကင်မရာဖြစ်၏။ တန်ဘိုးမှာ မလေးရှားရင်းဂစ် ၁၂၀ ခန့်ရှိပြီး စင်္ကာပူငွေဖြင့်တွက်ကြည့်ပါက ဒေါ်လာ ၅၀ ခန့် ရှိရာ စာဖတ်သူတို့အနေဖြင့် ထိုကင်မရာ၏ အရည်အသွေးကို အကြမ်းဖျင်း ခန့်မှန်းမိကြလောက်ပြီ ထင်ပါသည်။ ထိုကင်မရာသည် Point and Shoot အမျိုးအစားဖြစ်သည်။ ဓါတ်ခဲနှင့် ဖလင်ထည့်ပြီးပါက ပါဝါဖွင့်ရန်ပိတ်ရန် ခလုပ်တခု၊ ချောင်းကြည့်ပေါက်မှ မြင်ရသမျှကို ရိုက်ကူးနိုင်ရန် နှိပ်ရသည့် ခလုပ် တခု၊ စုစုပေါင်း ခလုပ်နှစ်ခုသာ ပါရှိသည်။ စင်္ကာပူရောက်လာကာစ အချိန်အထိ ထိုကင်မရာကိုသာ အသုံးပြု၍ ဓါတ်ပုံပေါင်း မြောက်မြားစွာ ရိုက်ကူးခဲ့ပါသည်။
တရက်တွင် မိတ်ဆွေတယောက်နှင့် မြို့ထဲသို့အသွား ပင်နင်ဆူးလားပလာဇာနှင့် မျက်နှာချင်းဆိုင် ခရစ်ယာန် ဘုရားရှိခိုးကျောင်းကြီး၏ စုလစ်မွန်းချွန်ဖြူဖြူကြီးသည် လပြည့်ဝန်းကြီးနောက်ခံတွင် အင်မတန်မှ တင့်တယ်လှပနေသည်ကို မြင်တွေ့ရလေသည်။ ထိုရှုခင်းကို မြင်တွေ့ရသောအခါ ကျွန်ုပ်လည်း မြန်မာပြည်တွင် နေထိုင်သော မဒမ်ပေါအား သတိရလှသဖြင့် အမှတ်တရ ဓါတ်ပုံရိုက်ကူး ပေးပို့ရန် အကြံဖြစ်၏။ သို့နှင့် စုလစ်မွန်းချွန်နှင့်တကွ လပြည့်ဝန်းကြီးအား ဓါတ်ပုံနောက်ခံဘက်ဂရောင်းတွင် ပါဝင်စေရန် မိမိကိုယ်တိုင် ကင်မရာချောင်းကြည့်ပေါက်မှ စိတ်တိုင်းကျ အားရအောင် ချောင်းကြည့်ပြီးသကာလ အတူပါသူ မိတ်ဆွေအား ကင်မရာအယူအဆ၊ အန်ဂယ်လ်စသည်တို့ကို အသေးစိတ်ညွှန်ကြားကာ ဓါတ်ပုံရိုက်ခိုင်းလေသည်။ ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်မူကား ဘုရားရှိခိုးကျောင်း ခြံစည်းရိုးနားတွင် ရပ်ပြီး ခြံစည်းရိုးတိုင်အား လက်တဖက်နှင့်ကိုင်ကာ ဗိုက်ချပ်စေရန် အသက်အောင့်လျက် ပို့စ်ပေးနေ၏။
မိတ်ဆွေခမြာမှာလည်း ဘယ်ဘ၀မှ ၀ဋ်ကြွေးမှန်းမသိ။ ပလက်ဖောင်းနှင့် မျက်နှာနှင့် ထိလုခမန်း လမ်းမပေါ်တွင် ၀ပ်တွားလျက် စိတ်ရှည်လက်ရှည် ရိုက်ပေးရှာ၏။ ဓါတ်ပုံရိုက်နေစဉ် ကားတက်ကြိတ်မသွားသည်မှာ ကံကောင်းလှချေသည်။
သို့နှင့် ထိုဓါတ်ပုံကို ကူးဆေးလိုက်သောအခါ အောက်ပါအတိုင်း အံ့မခန်းသည့် လက်ရာကောင်း ဓါတ်ပုံတပုံအဖြစ် တွေ့မြင်ရလေသည်။
ကျွန်ုပ်နှစ်သက်သဘောကျလျက်ရှိသော စုလစ်မွန်းချွန်းဖြူဖြူကြီးသည် လည်းကောင်း၊ ကောင်းကင်၌ ရွှန်းရွှန်းမြမြသာလျက်ရှိသော လပြည့်ဝန်းကြီးသည်လည်းကောင်း ဓါတ်ပုံထဲတွင် ပျောက်ခြင်းမလှ ပျောက်လျက်ရှိချေသည်။ ခြံစည်းရိုးတိုင်များနှင့် ကျွန်ုပ်သာလျှင် ထီးထီးမားမားကြီး ပေါ်လျက် ကျွန်ုပ်မှာလည်း သရဲကားထဲမှ သရဲ ကိုယ်ထင်ပြသကဲ့သို့ ရှိချေသည်။ ထိုအခါကျမှ ညရှုခင်းများကို ဖလက်ရ်ှထည့်ရိုက်လျှင် အလင်းရောင်အားနည်းသော ခပ်ဝေးဝေးက အရာများ မပါတတ်ပုံကို ကျွန်ုပ် ရေးရေးမျှ စတင်သဘောပေါက်လေတော့သည်။ ထိုဓါတ်ပုံကို အီလက်ထရောနစ်ဌာနမှ ပါမောက္ခ ဆရာကြီးဒေါက်တာစန်းတင့် မြင်သောအခါ… “ကိုပေါနှယ်… စင်္ကာပူမှာ ဒီလောက် ဓါတ်ပုံရိုက်စရာ နေရာတွေ ပေါတာ၊ သူ ဘယ်နားမှာများ သွားရိုက်ပါလိမ့်” ဟု အားမလိုအားမရ မှတ်ချက်ချရှာသည် ဟူသတည်း။
သို့နှင့်လည်း မမှတ်သေး။ မဒမ်ပေါနှင့် လက်ထပ်အပြီး ပီနန်သို့ နှစ်ယောက်အတူ ပထမဦးဆုံးအကြိမ် သွားရောက် လည်ပတ်ရာတွင် ကင်နွန်အမှတ်တံဆိပ် ကင်မရာဖြင့် ပီနန်ဘုန်းကြီးကျောင်းထဲတွင် ဓါတ်ပုံများ ရိုက်ခဲ့သေး၏။ သုံးချောင်းဒေါက်ပေါ်တွင် တပ်ဆင်ထားသော ကင်မရာကို Timer mode တွင်ထားလျက် ခလုပ်နှိပ်ခဲ့ပြီး ရိုက်ကွင်းထဲသို့ အူယားဖားယား အပြေးဝင်ကာ ရိုက်ကူးယူခဲ့သည့် အောက်ပါ ဓါတ်ပုံတွင် ကျွန်ုပ်၏ အလင်းအမှောင် အယူအဆ ကျွမ်းကျင်ပုံကိုသာမက ကျွန်ုပ်၏ ပင်ကိုယ်အသားအရည် ဖြူစင် လင်းလက်ကာ ကိုယ်ရောင်ကိုယ်ဝါ တောက်ပပုံ တို့ကို အတိုင်းသား တွေ့မြင် ရှုစားနိုင်ပေသည်။ (ဓါတ်ပုံထဲတွင် အရိပ်ကျသော အခြမ်းမှာ ခါးထောက်၍ စတိုင်ပေးနေသူမှာ ကျွန်ုပ်ပင်ဖြစ်ချေတော့သည်။)
ထိုမှတပါးလည်း ကျွန်ုပ်တို့ တည်းခိုရာ ဟိုတယ်သို့ ပြန်ရောက်သောအခါ ဟိုတယ်ပြူတင်းပေါက်မှ လှမ်းကြည့်လိုက်သော် ပီနန်ကျွန်းနှင့် မလေးရှားကျွန်းမကြီးအကြား ရေလက်ကြားရှုခင်းမှာ နေခြည်အောက်တွင် လွမ်းမောဖွယ်ရာ လှပလျက်ရှိသည်ကို မြင်တွေ့ရ၏။ ယင်းကို နောက်ခံထားကာ လင်မယားနှစ်ယောက် ပြူတင်းပေါက်နားတွင် နေရာယူလျက် ဤသို့ ဤပုံလည်း ဓါတ်ပုံရိုက်ကူးခဲ့ပါသေးသည်။
(ဤဓါတ်ပုံထဲတွင်လည်း ဘုရားစူး မိုးကြိုးပစ် ကျွန်ုပ်ပုံ ပါသည်။ သေသေချာချာ မျက်လုံးကို ပြူးပြဲ၍ ကြည့်ရှုပါရန်။)
ဤပို့စ်ကို ဖတ်ရှုပြီးသကာလ ကျွန်ုပ်ထံ၌ ဓါတ်ပုံသင်တန်း တက်လိုသူများ အမြန်ဆုံး စာရင်းပေးသွင်းနိုင်ကြပါပြီ။
သင်တန်းသား အရေအတွက် အကန့်အသတ် ရှိသည်။ လာသလောက်သာ လက်ခံမည်။
Posted by ကိုပေါ on Monday, July 13, 2009
Labels: general Comments: (43)
Labels: short story Comments: (14)
Labels: general, republished Comments: (22)
Razali, Gambari နဲ့ Ban Ki Moon
ရာဇာလီခမြာ အလဲလဲ အကွဲကွဲ။
ဘန်ဘန် ကိုယ်တိုင် ဆင်းလာရတော့တာပေါ့။
သူ့စားကျက်ကွင်း လာလုတယ် အောက်မေ့သလားမသိ
ဝှေ့မယ် ဝှေ့မယ် တကဲကဲလုပ်ပြန်တော့
ကျွဲကတော့ မြက်စားပျက်မယ် မထင်ပေဘူး။
မမြဲသော တရားကို သင်နားမလည်…
သင်ပြုသောကံ၏ အမွေကို သင်သာလျှင် ခံစားရမည်ပ။
- ကျည်းကန်ကိုပေါ။ -
Labels: Poem Comments: (13)
Labels: general Comments: (38)
(ဘဒူ့ကိုမှ မရည်ရွယ်ပါ။း-)
Posted by ကိုပေါ on Wednesday, July 8, 2009
Labels: myself Comments: (26)
အခြားဘလော့ဂါများ လတ်တလော ရေးသားကြသော ပို့စ်များအနက်မှ ကျနော့်အနေဖြင့် ပြန်လည်ညွှန်းဆိုချင်သော ပို့စ် ၃ ခုကို ညာဘက်ကော်လံတွင် ထိပ်ဆုံးက ဖော်ပြထားပါသည်။ ဘလော့ဂ်များတွင် ကျနော်ဖတ်မိသမျှ ကျွန်တော်နှစ်ခြိုက်သော ပို့စ်များကို ပြန်လည်ညွှန်းဆိုခြင်းမျှသာ ဖြစ်ပါသည်။ စာသားပေါ်တွင် ကလစ်ခေါက်၍ သွားရောက် ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။ ယခင်က တကြိမ်တွင် ပို့စ်တခုတည်းကိုသာ ညွှန်းဆိုသော်လည်း ယခုမှစ၍ ပို့စ် ၃ ခုအထိ တိုးချဲ့ညွှန်းဆိုသွားပါမည်။ အညွှန်းကို တပတ်လျှင် နှစ်ကြိမ်ခန့် ပြောင်းလဲညွှန်းဆိုပေးပါမည်။
Labels: Announcement Comments: (1)
မခင်ဦးမေ၏ ဘလော့ဂ်တွင် သွားချောင်းလိုက်သောအခါ OGDS ဟူသော ပို့စ်ကို တွေ့ရ၏။
ထို့နောက် စစချင်း ခေါင်းစဉ်ငယ်မှာ “အစာအိမ်ပိုက်မြိုမယ်” ဟူသတည်း။ ဟယ်..သူ့ဟာက “သွားစမ်း၊ ဘားလမ်း၊ စားစမ်း၊ မေ စပါယ်ရှယ် မုန့်ဟင်းခါး” ဆိုသည့် သော်တာဆွေရဲ့ မုန့်ဟင်းခါးကြော်ငြာကိုပင် ပြေးသတိရမိစေ၏။ စာဖတ်သူမှာ ချက်ချင်းပင် ဆေးရုံသို့ပြေး၍ အစာအိမ်ပိုက်ကို မြိုရတော့မလိုလို။ သို့မဟုတ် ပိုက်မြိုသူ ကံထူးရှင်များကိုပင် အားကျရတော့မလိုလို။
ထို့ထက် ပိုဆိုးသည်မှာ ပို့စ်အောက်ခြေတွင် တင်ထားသည့် ကိရိယာကြီးပင်တည်း။ ယင်းကို မြင်ရသောအခါ ကျနော့်အဖို့ “ရင်မှ အကြင်နာ၊ ညင်သာစွာပဲ နိုးထလာပြန်ပြီ” ဟု ဆိုရလောက်အောင် ယခင် ၂ နှစ်လောက်က အလားသဏ္ဍာန်တူသည့် ပိုက်တချောင်းနှင့် နှစ်ပါးသွားခဲ့ရသော အဖြစ်အပျက်ကို တရေးရေး ပြန်လည်မြင်ယောင်မိကာ ထမင်းလုံးတစ္ဆေအခြောက်ခံရသကဲ့သို့ တုန်လှုပ်ခြောက်ခြားမိပါသည်။
လွန်ခဲ့သော ၂ နှစ်ခန့်က ကိုပေါဆိုသော သူသည် ကျန်းမာရေး အင်မတန်လိုက်စား၏။ ညဦးပိုင်းရောက်လျှင် ဘွန်းလေးဘူတာနှင့် မလှမ်းမကမ်းရှိ နေအိမ်မှ ထွက်ကာ NTU ကျောင်းကြီးအတွင်းရှိ ပတ်လမ်းကြီးတွင် တပတ်နီးပါးခန့်ပတ်ကာ လမ်းလျှောက်သည်။ နှစ်နာရီခန့် လျှောက်ရသည်။ ဇနီးကြင်ဖက်သက်လျာ မဒမ်ပေါသည်လည်း သူနှင့် အတူပါ၏။ ပထမတော့ ရိုးရိုး လမ်းလျှောက်ရုံမျှသာ။ နောက်တော့ ၀ိတ်ကလည်း ၁၀ ကီလိုမျှ ထိုးကျသွားသဖြင့် အားတက်ကာ အမြန်လျှောက်သည်။ နောက်ပိုင်း ထို့ထက်အားတက်လာပြန်ကာ ရွရွလေးပြေး (ကျော်ခင်လုပ်ခြင်း)။ နောက်ဆုံးတွင် အိုလံပစ်အပြေးသမားနှယ် အမြန် ပြေးသည့်အဆင့်သို့ အဆင့်ဆင့် တက်လှမ်းနိုင်ခဲ့လေသည်။
ပထမတော့ ဟုတ်တုတ်တုတ်။ ကိုယ်အလေးချိန်တွေလည်း ကျ။ ဘောင်းဘီတွေ၊ အင်္ကျီတွေလည်း ချောင်။ ယခင်က မတော်တော့သဖြင့် ချောင်ထိုးထားသော ဆိုက်အသေးများကို တဆင့်ချင်း ပြန်ဝတ်ကြည့်ရာ တော်နေသဖြင့် မိမိ၏ သေးငယ်သွားသော ဗိုက်ခေါက်ကလေးကို လက်ဖြင့်စမ်းကာ ပီတီတွေ လှိုင်လှိုင်ဖြာနေတတ်သည်။ တရက် ရုံးအဆင်းတွင် မဒမ်ပေါ ဖုန်းဆက်လာရာ သူသည် “နေဦး၊ ခဏစောင့်အုံး၊ ရုံးပေါ်မှာ ကျနေခဲ့တာ ပြန်သွားကောက်ရဦးမယ်” ဟု ပြောလေသည်။ မဒမ်ပေါက ဘာကျကျန်နေခဲ့လို့လဲဟု မေးရာ…. “အတွင်းခံဘောင်းဘီ ချောင်ပြီးပြုတ်ကျနေခဲ့လို့ ပြန်သွားကောက်ရဦးမယ်” ဟု ဖြေဆိုမိရာ တဖက်က မဒမ်ပေါသည် ခွက်ထိုးခွက်လန်ရယ်မော၍ “ဒါတော့ လွန်လွန်းပြီ” ဟု ဆိုလေသည်။
ထိုသို့လျှင် ပီတိတွေ လှိုင်လှိုင်ဖြာလျက် အပြေးလေ့ကျင့်ခန်း ပုံမှန်ဆင်းနေရာမှ တရက်တွင် လောဘကြီးပြီး ခရီးတဖြတ်ကို မီတာ ၁၀၀ ပြေးသလောက်နီးနီး အမြန်ပြေးမိ၏။ အိမ်သို့ရောက်၍ ရေချိုးခန်းသို့ဝင်ကာ ရှူရှူးပေါက်သောအခါ ရှူရှူးအရောင်တို့သည် မြန်မာ့သွေးရဲရဲနီသည်ဟူသော အဆိုကို သက်သေခံနေသည့်အလား ပတ္တမြားရောင် ဖားကပေါင်သံလွင်လွင် ဖြစ်နေတော့သည် ဟူသတည်း။
သို့နှင့် ဖတ်စ်ဖော်ဝါ့ဒ်လုပ်လိုက်ရသော် စင်္ကာပူရှိ ဆေးရုံကြီးတခုဝယ် ဓါတ်မှန်ကြီးငယ် အသွယ်သွယ် ရိုက်ရ၏။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်မဟုတ်ပါဘဲနှင့် အာထရာဆောင်း ရိုက်ခွင့်ကြုံ၏။ ဆရာဝန်ကလည်း ဆီးလမ်းကြောင်းတွင် ကျောက်အသေးတခု မြင်ရသလိုလို ဘာလိုလိုပြော၏။ ငယ်စဉ်က “လက္ခဏာဆရာက ပြောတယ်မေရယ်၊ ဆီးလမ်းကြောင်းမှာ ကျောက်တည်နေတယ်” ဟု စိုင်းထီးဆိုင်သီချင်းကို ဖျက်၍ ပေါက်ကရ နိမိတ်မရှိ နမာမရှိ သီဆိုခဲ့မိသည်ကိုပင် နောင်တရ ရတော့မည်လိုလို။
သည်ကြားထဲ ဆရာဝန်ကလည်း အားပေးဖော်ရ၏။ ကျောက်ကြောင့်သာမဟုတ်၊ ကင်ဆာကြောင့်လည်း ထိုသို့ သွေးထွက်နိုင်ကြောင်း။ ထို့ကြောင့် ဆီးအိမ်အတွင်းသို့ စကုပ်ဖြင့် ကြည့်ရှုရန်လိုအပ်ကြောင်း၊ လောလောဆယ်တွင် ကျောက်ကြေဆေး ပေးလိုက်မည်ဖြစ်ကြောင်း ပြော၏။ ရေများများသောက်ဖို့လည်း မှာလိုက်သေး၏။
ထိုအတောအတွင်း မြန်မာပြည်ပြန်သော မိတ်ဆွေတို့ကလည်း ဆီးရွှင်စေသော သံမနိုင် ကျောက်မနိုင်အရွက်များကို သယ်လာပေး၏။ ဆေးရုံသွားသည့်နေ့မှစ၍ လေ့ကျင့်ခန်းကို ရပ်ထားရ၏။ သွေးကား ထပ်မံ၍ မပါတော့ချေ။
သို့နှင့် စကုပ်နှင့် ကြည့်ရန် ချိန်းထားသောရက်တွင် ဆေးရုံသို့ ပြန်သွားရ၏။ မသွားခင်တွင် မိတ်ဆွေဖြစ်သူ ကိုခြင်္သေ့က မြန်မာပြည်တွင် သူကျောက်ချေခဲ့ဘူးသော အတွေ့အကြုံကို ပြန်ပြောင်းပြောပြကာ အားပေး၏။
“ကိုပေါရေ…. ကျနော့်တုန်းကတော့ နွားသတ်သလိုပဲဗျ။ တော်တော်ခံလိုက်ရတယ်”….တဲ့။
အခြား သိနားလည်သူများကလည်း “မနာကျင်သော်လည်း တော်တော်လေး အနေရခက်လိမ့်မည်”ဟု ပြောလိုက်သေး၏။
သို့နှင့် သာမန်အချိန်တွင် လင်ပန်းအသေးခန့်မျှ မျက်နှာအ၀န်းအ၀ိုင်းရှိသော ကျနော်သည် ဆေးရုံက ချိန်းဆိုထားသောနေ့၌ ဇီးရွက်ခန့် မျက်နှာဖြင့် စမ်းသပ်ခန်းအပြင်ဖက်တွင် ထိုင်စောင့်နေရ၏။ ခဏအကြာတွင် သူနာပြုဆရာမတယောက်သည် ကိရိယာများထည့်ထားသော တွန်းလှည်းတခုကို ကျနော့်ရှေ့မှ တွန်းလျှောက်ကာ အခန်းထဲသို့ ၀င်သွား၏။ တွန်းလှည်းပေါ်ရှိ ကိရိယာများ၏ ပုံသဏ္ဍာန်နှင့် လုံးပတ်မှာ မခင်ဦးမေ၏ ဘလော့ဂ်တွင် ပြထားသော ကိရိယာနှင့် မတိမ်းမယိမ်းခန့်ရှိရာ ကျနော့်မှာ ထိုကိရိယာများသည် ကျနော့်အတွက် မဖြစ်ပါစေနှင့်ဟု ဆုတောင်းနေမိ၏။ သို့သော် ဘေးတွင်ထိုင်နေသော မဒမ်ပေါက မျက်လုံးအ၀ိုင်းသားနှင့် “ဒါကြီးတွေကို ထည့်မှာလားမသိဘူး” ဟု မသိသားဆိုးဝါးစွာ ပြောလိုက်ရာ စောစောက ဇီးရွက်ခန့်ရှိသော ကျနော့်မျက်နှာမှာ ဇီးစေ့ခန့်သာ ကျန်တော့မည် ထင်သည်။
သို့နှင့် အခန်းထဲသို့ဝင်သောအခါ ထိုကိရိယာကြီးများမှာ အမှန်ပင် ကျနော့်အတွက်ဖြစ်ကြောင်း တုန်လှုပ်ခြောက်ခြားစွာ သိရှိရလေသည်။ ဆရာဝန်သည် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းကို ကျနော်နားလည်အောင် ရှင်းပြပြီးသည့်နောက် ကျနော်၏ ဆီးလမ်းကြောင်းထဲသို့ ထုံဆေးများကို ထိုးထည့်လေသည်။ ထုံဆေးထည့်သော ပြွတ်မှာ စက်ဘီးလေထိုးသည့် လေထိုးတံ အငယ်စားပမာဏ ရှိလေသည်။
ထိုနောက် ခဏမျှကြာသော် ထိုကိရိယာကို ကျွန်တော်၏ ဆီးလမ်းကြောင်းအတွင်းသို့ စတင်ထိုးသွင်းတော့၏။ လုံးပတ်မှာ အဖျားတွင် ခဲတံလုံးပတ်ခန့်ရှိ၍ အရင်းတွင်မူ လက်ညိုးခန့်တုတ်လေသည်။ ပိုက်အရှည်မှာ အရှည်မှာ ၂ ပေခန့်ရှိသည်။
ထုံဆေးတန်ခိုးကြောင့် နာကျင်ခြင်းကိုမူ မခံစားရ။ ဤမျှလုံးပတ်ရှိသော ကိရိယာသည် ထိုမျှသေးငယ်သော အပေါက်အတွင်းသို့ အဘယ်သို့ လျှောရှူချောမွေ့စွာ ၀င်သွားနိုင်ပါသနည်းဟု ကျွန်တော် တွေးတောနေမိ၏။ ပိုက်ထိပ်တွင် မီးလုံးနှင့် ကင်မရာပါသဖြင့် နံဘေးရှိ မော်နီတာပေါ်တွင် ပိုက်သွားရာ ဆီးလမ်းကြောင်းတလျှောက်ကို မြင်ရသည်။ ကိုယ့်ကိုယ်တွင်းကို မြင်နေရသဖြင့် တရားရချင်သလိုလို ဘာလိုလို။ ခဏနေတော့ ပိုက်ခေါင်းသည် ဆီးအိမ်အတွင်းသို့ ရောက်သွားသည်။ အထဲတွင် ရေများကို မြင်ရသည်။ ထုံဆေးအမှုန်အမွှားတချို့ကိုလည်း မြင်ရသည်။ ကျောက်ကပ်နှစ်ခုမှ ဆင်းလာသော အပေါက်ကလေးနှစ်ခုကိုလည်း မြင်ရသည်။
ဆရာဝန်သည် ဆီးအိမ်ပတ်ပတ်လည်တွင် ကင်ဆာလက္ခဏာများကို လှည့်ပတ်ရှာဖွေ၏။ မတွေ့။ သို့သော် ဆီးအိမ်နံရံရှိ ကျနော်၏ သွေးကြောတို့သည် နီမြန်းနေသည်။ ဤသည်မှာ အနည်းငယ် ထူးဆန်းသည်ဆို၏။ သို့နှင့် ပိုက်ဖြင့် ဟိုသည်လှည့်ပတ်ကြည့်ရှု ဓါတ်ပုံရိုက်ခြင်းကို ခေတ္တဆိုင်းငံ့ကာ၊ တနေရာသို့ တယ်လီဖုန်းခေါ်ဆို၏။
ကျနော်မှာ မုတ်ဆိတ်အရိပ်ခံသလို ပက်လက်အနေအထားမှ ပိုက်တန်းလန်းနှင့် စောင့်ရ၏။ သူဖုန်းခေါ်သည်မှာ တဖက်မှ ကိုင်မည့်လူမရှိသဖြင့် အတော်လေးကြာသည်။ ထုံဆေးသည် တဖြေးဖြေး အာနိသင် လျော့ပါးလာသည်ထင်သည်။ ကျနော့်မှာ မအီမသာဖြစ်လာသည်။ ထိုအာဝေဏိက ဒုက္ခကို မခံမရပ်နိုင်ဖြစ်လာကာ ခြေဖျားလက်ဖျားလေးများပင် တုန်ယင်လာသည်။
ပုဂ္ဂိုလ်က ဖုန်းခေါ်၍ မရသောအခါ နာ့စ်မကို လူကိုယ်တိုင်လွှတ်၍ သွားအခေါ်ခိုင်းသည်။ သူ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တယောက်အား ကျနော့်ဆီးအိမ်နံရံကို ပြချင်၍ဖြစ်သည်။ ထိုသူများမှာ တော်တော်နဲ့ပေါ်မလာ။ ကျနော်က မခံနိုင်တော့၍ ပိုက်ဖြုတ်ပေးရန်ပြောသော်လည်း ပုဂ္ဂိုလ်က မကြားချင်ယောင်ဆောင်နေ၏။ ကျနော့်အထင် နာရီဝက်ခန့်ကြာမှ သူ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ပေါက်ချလာရာ ဆီးအိမ်ကို ကြည့်၍ ဓါတ်ပုံရိုက်ကာ ပိုက်ဖြုတ်ပေးဖော်ရသည်။ ကျနော့်မှာ ထိုအချိန်တွင် ချွေးသီးချွေးပေါက်ကြီးများပင် သီးနေလေချေပြီ။ မိန်းမများ ကလေးမွေးသည့် ဒုက္ခကို ကိုယ်ချင်းစာမိပါ၏။
ဇာတ်ပေါင်းသော်… ကင်ဆာလည်းမဟုတ်၊ ကျောက်ကြောင့်လည်းဟုတ်ပုံမရ။ ဆရာဝန်သည် ကျနော့်အား အားကစားမလုပ်ခင် ရေများများသောက်ရန် မှာကြားခြင်းဖြင့် အမှုတွဲပိတ်သွားလေတော့သတည်း။ ငွေကား စုစုပေါင်း ဒေါ်လာ လေးရာခန့်ထွက်သွားလေသည်။ ရုံးမှ ပြန်လည်ကာ ထုတ်ယူရသဖြင့် တော်ချေသေး၏။
မတော်သေးသည်မှာ လေ့ကျင့်ခန်း ဆက်မလုပ်ရဲတော့သဖြင့် ယခင်က သုံးလေးလ အချိန်ယူကာ လျှော့ချခဲ့ရသော ကိုယ်အလေးချိန်သည် ၂ ပတ်အတွင်း မူလနေရာသို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိသွားကာ ၀ဆဲ ဖြိုးဆဲ လှဆဲ ခန့်ဆဲ (ဆဲတာနဲ့ အကျိုးပေးတယ်လေ) ဖြစ်သွားလေတော့သည်။
ဤကား ကျွန်ုပ်နှင့် ပိုက်ဇာတ်လမ်းဖြစ်ချေတော့သည်။ အကြင်ပိုက်ကို မိမိ၏ ဒွါရကိုးပေါက် မည်သည့်အပေါက်ကမျှ ထပ်မံ၍ သွတ်သွင်းရခြင်း ဤဘ၀တွင် မကြုံရလိုတော့ပါ။
မောင်သာရ ၀တ္ထုခေါင်းစဉ်လို ပြောရလျှင်တော့…. “ပိုက်တပ်ခြင်းနှင့် မကြုံကြိုက်လို” ပေါ့ခင်ဗျာ။
Posted by ကိုပေါ on Monday, July 6, 2009
Labels: political post Comments: (19)
“သောတရှင်များနဲ့ တူ၊ တူမလေးတို့ ကျန်းခန့်သာလို့ မာပါစ”
ငယ်ငယ်တုန်းက ဘီဘီစီ နားထောင်တဲ့အခါ ဦးဖေသန်းရဲ့ “မေးပါများ စကားရ” ကဏ္ဍမှာ သည်လို နှုတ်ခွန်းဆက်လေ့ရှိတာကို သတိရမိသည်။
ကျနော်လည်းပဲ စာဖတ်သူတို့ကို “မိတ်ဆွေတို့ ကျန်းခန့်သာလို့ မာပါစ” လို့ နှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ပါသည်။
ဘလော့ဂ်မရေးဖြစ်သည်မှာ တပတ်ကျော်ကျော်ကြာသွားရာ မပြောမဆို ပျောက်နေသည့်အတွက် နေထိုင်မကောင်းဖြစ်လေသလောဟု မိတ်ဆွေအချို့ စိတ်ပူကြဟန်တူသည်။ အချို့လည်း ဖုန်းဖြင့် တကူးတက ဆက်၍ မေးကြ၊ မြန်းကြသည်။
အချို့လည်း ကျနော်အိမ်ပြောင်းသည်ဆို၍ ကိုပေါတယောက် ကြီးပွားချမ်းသာကာ ကွန်ဒိုတို့ ငါးခန်းအိမ်တို့ ၀ယ်ယူကာ ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်သည်ဟု ထင်ဟန်ရှိသည်။ အချို့လည်း ကိုပေါတယောက် သြော်ဇီတို့ ကနေဒါတို့သို့ ပြောင်းရွှေ့တော့မည်ဟု ထင်ဟန်ရှိသည်။
ကျနော်နေကောင်းပါသည်။ အိမ်ပြောင်းရွှေ့အပြီး တပတ်ခန့် ခေတ္တအနားယူနေခြင်းမျှသာ ဖြစ်ပါသည်။ ဘက်ထရီ အားဖြည့်သလိုပေါ့။ မကြာခင် ပို့စ်များကို ဆက်လက်ရေးသားပါမည်။
ဤပို့စ်တွင် ဘလော့ဂ်နှင့်ပတ်သက်၍ ကျေးဇူးတင်ထိုက်သူများကို ကျေးဇူးတင် စကား ပြောကြားရပါဦးမည်။ အစဉ်လိုက်ရေးထားသော်လည်း အားလုံးကို တန်းတူညီမျှ ကျေးဇူးတင်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ရှေးဦးစွာ စိတ်ဝင်တစားလာရောက်ဖတ်ရှုသူများကို ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ တကယ်တော့ ကျနော်သည် စာရေးသားခြင်းအလုပ်ကို ၀ါသနာပါ၍ ဘလော့ဂ်ရေးနေခြင်းမဟုတ်။ ရည်ရွယ်ချက်တခုနှင့် ဘလော့ဂ်ရေးနေခြင်းဖြစ်ရာ စာဖတ်မည့်သူမရှိက ကျနော့်ရည်ရွယ်ချက်လည်း အောင်မြင်မည်မဟုတ်။
ကျေးဇူးတင်ထိုက်သူ နောက်တဦးမှာ ဘလော့ဂ်ရေးသည်ကို အလုပ်တခုသဖွယ်သဘောထားကာ ပုံမှန်ရေးနိုင်စေရန် ပံ့ပိုးပေးသော မဒမ်ပေါ ဖြစ်ပါသည်။ မဒမ်ပေါ၏ နားလည်အားပေးမှုမပါလျှင် အိမ်ထောင်သည်တယောက်ဖြစ်သော ကျနော့်အဖို့ သည်လောက်အထိ ရေးနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။
ထို့ပြင် ကျနော့်ဘလော့ဂ်ကို လင့်ခ်ချိတ်ပေးထားသော ဘလော့ဂါအားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ သူတို့ အကူအညီကြောင့် လာရောက်ဖတ်ရှုသူအရေအတွက် သိသိသာသာ များပြားလာပါသည်။ ထိုအထဲတွင် ၀ီရှီမီ၊ ဒီဂိုလာ၊ ပန်ဒိုရာ၊ မေငြိမ်း၊ ခင်မင်းဇော်၊ ခင်ဦးမေ၊ ဖူးနုသစ်၊ မြန်မာဘလော့ဂ်ရီးဒါးစ် ဘလော့ဂ်များမှ လာရောက်သူများမှာ အများဆုံးဖြစ်ပါသည်။
ကျွန်တော့်ဘလော့ဂ်ပို့စ်များကို ဖတ်ရှုပြီးနောက် မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီအရေးအတွက် တက်ကြွစွာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လာသူများကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ အထူးသဖြင့် အားတက်ရသည်မှာ အခြားနိုင်ငံတခုမှ ကျနော်နှင့် လုံးဝသိကျွမ်းဘူးခြင်းမရှိသော စာဖတ်သူတဦးက ပြည်တွင်းရှိ ဒီမိုကရေစီအင်အားစုများအတွက် ငွေကြေးပေးပို့ လှူဒါန်းခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ထိုအလှူရှင်ကို ကျေးဇူးတင်ကြောင်း ဘလော့ဂ်ပေါ်မှ တဆင့် ထပ်မံပြောကြားပါရစေ။
ယင်းမတိုင်မီက မိတ်ဆွေဘလော့ဂါတဦးမှတဆင့်သော်လည်းကောင်း၊ ပြင်ပတွင် သိကျွမ်းမှုများကြောင့်လည်းကောင်း လစဉ်ထည့်ဝင်လှူဒါန်းသူများရှိကြသော်လည်း ဘလော့ဂ်မှတဆင့် အလှူငွေ ထည့်ဝင်သူမှာ အဆိုပါ အလှူရှင်သည် ပထမဦးဆုံးဖြစ်ပါသည်။ ထိုအလှူငွေကိုလည်း အလှူငွေ စုဆောင်းပေးပို့ရန် တာဝန်ယူထားသူထံသို့ အလှူရှင်အတွက် ထင်သာမြင်သာရှိသော လုပ်ငန်းစဉ်ဖြင့် လွှဲပြောင်းပေးပို့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။
နောက်ဆုံးပို့စ်ရေးသားစဉ်က လာရောက်ဖတ်ရှုသူအရေအတွက်မှာ နေ့စဉ် ၇၀၀ ခန့် ပျှမ်းမျှရှိပါသည်။ ဤအရေအတွက်မှာ ပြည်ပရောက်မြန်မာအရေအတွက်နှင့်စာလျှင် မပြောပလောက်သော်လည်း ကျွန်တော့်အတွက်မူကား အားရလောက်သော အရေအတွက်ဖြစ်ပါသည်။ စာဖတ်သူ ၇၀၀ ခန့်ကို အမြဲလိုလို ထိတွေ့နေခွင့်ရသည့် အနေအထားမှာ ကျနော့်ရည်ရွယ်ချက်အတွက် အရေးပါလှပါသည်။ ထိုအထဲမှ အချို့ရေးသားကြသော ကွန်မင့်များမှာ ကျနော့်အတွက် မှတ်သားဖွယ်၊ လိုက်နာအတုယူဖွယ်လည်း ဖြစ်ပါသည်။ ထိုသို့ တကူးတက ကွန်မင့်ရေးသားပေးသူများကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
ထိုအရေအတွက်ထဲတွင် ကျနော်၏ အယူအဆကို နှစ်သက်လက်ခံသဖြင့် မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီအရေးလှုပ်ရှားမှုတွင် ရေရှည်ပူးပေါင်းပါဝင်ရန် စိတ်သန်လာသူမှာ ဆယ်ဂဏန်းမျှသာ ရှိစေဦး။ ကျနော်အနေဖြင့် အားတက်မိပါသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် လူ ဆယ်ယောက်ပူးပေါင်းပါဝင်လာလျှင် ဆယ်ဆတိုး၍ လုပ်နိုင်သည့်သဘောဖြစ်သည်။
မြန်မာပြည်ကြီး ဒုက္ခနွံတွင်းမှ လွတ်မြောက်သည်ကို မြန်မာလူမျိုးတိုင်း မြင်လိုကြသည်ချည်းဖြစ်သည်။ ဤအချက်ကို ကျနော်တို့အနေဖြင့် သံသယဖြစ်စရာအကြောင်းမရှိပါ။ သို့သော် ထိုသို့လွတ်မြောက်ရန်မှာ ကျွန်တော်တို့အားလုံးက လွတ်မြောက်ရာ လွတ်မြောက်ကြောင်း တစုံတခုတော့ လုပ်နေဖို့ လိုအပ်ပါသည်။ မည်မျှပင် သေးဖွဲသော လုပ်ရပ်ဖြစ်စေ… လုပ်နေဖို့တော့ လိုပါသည်။ လုပ်ကိုင်ရန်မလွယ်ကူသော ကြီးမားသည့် အမှုကိစ္စရပ်ကြီးများကို “ဆင်ဖမ်းမည်၊ ကျားဖမ်းမည်” လုပ်နေမည့်အစား အားလုံးလက်တွေ့ကျသော သေးငယ်သော ကိစ္စကလေးများမှ စတင်လုပ်ကိုင်ကြသင့်သည်ဟု သဘောရပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ၏ လက်ရှိအနေအထား၊ နိုင်ငံရေးအခြေအနေနှင့် ကျွန်တော်တို့ ပြည်ပရောက်မြန်မာများအနေဖြင့် မြန်မာ့နိုင်ငံရေးအပြောင်းအလဲအတွက် မည်သို့မည်ပုံ အထောက်အကူပြုနိုင်ပုံကို နောက်လာမည့် ပို့စ်များတွင် အကျယ်တ၀င့် ထပ်မံရေးသားပါဦးမည်။
ဒီပို့စ်ကိုတော့ ဘီဘီစီ ဦးဖေသန်း၏ စကားနှင့်ပဲ နိဂုံးချုပ်လိုက်ပါမည်။
“နောက်တပို့စ်မှာ ဆုံကြဦးမယ်လေ….၊ ပျော်ပျော်ပါးပါးပေါ့။”
Posted by ကိုပေါ on Thursday, July 2, 2009